မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: October 2010 “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
ပစ်ဖို့ထိုင်ခုံလုဖို့ သာ သိတာ ကယ်ဖို့ က န အ ဖ အလုပ်မဟုတ်
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 6:36 PM0comments
by Lu Cifer on Sunday, October 31, 2010 at 8:59pm
Tell Burmese No Lies ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုသည်။﻿
Saturday, 30 October 2010 18:32
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/editorial/2008-10-06-11-24-23/4432-2010-10-30-11-37-43Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 6:28 PM0comments
ယခု ခရိုင် ဥက္ကဌ ဦးအောင်ကျော်ဇော မက်မန်းထုတ်ဖြင့် ပစ်ပေါက်ခံရသော သတင်းမှာ နေပြည်တော်ထိ ရောက်ရှိသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ သတင်းမှာ ယခုအခါ ကျောက်ဖြူတွင် လူပြော အများဆုံး သတင်း ဖြစ်နေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:53 PM0comments
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန | တနင်္ဂနွေနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၁ နာရီ ၅၉ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲမပေးဘဲနေခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေသစ်ကို ကန့်ကွက်ကြရန် ရန်ကုန် NLD လူငယ်များ စနေနေ့ မနက်က လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြသည်။
တာမွေမြို့နယ်တွင် NLD လူငယ် ၂ဝ က “ မဲမပေးချင်က မပေးဘဲ နေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်” ဟု ရေးထားသော လက်ကမ်းစာစောင် ၁,၅ဝဝ ခန့် နံနက်ပိုင်းတွင် နှစ်နာရီကြာ ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
“ပြည်သူတွေအစိုးရ အလိမ်မခံရအောင် လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ ပြည်သူတွေကို လိမ်နေတဲ့ အကြောင်း ပြည်သူတွေ သိအောင် ပြောပြခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ ကျေနပ်မိတယ်” ဟု လှုံ့ဆော်ရေးလူငယ်တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
နိုဝင်ဘာ ၇ ရက် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြန်ကြားရေးဌာနက နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာများမှတဆင့် ဖျော်ဖြေရေးဟန် မဲပေးရေး လှုံ့ဆော်မှုများ အရှိန်မြှင့် ဖော်ပြနေစဉ် NLD က မဲမပေးဘဲ သပိတ်မှောက်ရန် လှုံ့ဆော်မှုကို သိသာစွာ ပြသလာခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
“ကျနော်တို့က ဥပဒေဘောင်တွင်းက လုပ်တာပါ” ဟုလည်း အဖွဲ့ဝင် လူငယ်က ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တခြား NLD ခေါင်းဆောင်များ ပုံပါ တီရှပ်ဆင်တူ ဝတ်ထားသော လူငယ်များ၏ ဝေစာတွင် ” ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်တဲ့ မသမာမှုတွေရှိရင် ပြည်သူတွေ ရဲစခန်းကို တိုင်ရမယ်” ဆိုသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စကားကို ကိုးကားထားသည်။
သို့သော်လည်း လျှို့ဝှက်စွာ မဲပေးခွင့်ရှိခြင်းနှင့် ကြိုတင်မဲကို အတင်းအကြပ် ပေးခိုင်း၍ မရကြောင်း ရှင်းလင်းချက်နှင့်အတူ မဲရေတွက်မှု စောင့်ကြည့်ခွင့်တို့ကိုလည်း လှုံ့ဆော်စာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၂ဝဝ၈ အခြေခံဥပဒေကို သဘောမတူသော ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ NLD က မဲမထည့်ရန် လှုံ့ဆော်နေစဉ် ကြံ့ဖွံ့စသည့် ပါတီ ၃၇ ခုက ဝင်ပြိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:46 PM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 6:08 AM0comments
ဖွတ် … မိကျောင်းဖြစ်တဲ့နေ့ 
ဖွတ် မိကျောင်း ဖြစ်
နိုဝင်ဘာ ခုနှစ်ရက် နေ့ ဖြစ်တယ် ။
သူခိုးလက် ဓါးရိုးကမ်းသူများရဲ့ 
အကောင်းမြင်ဝါဒ ထားကြည့်စမ်းပါအရှက်တရား ကင်းတဲ့စကား
အလုအယက် တိုးဝှေ့ 
ဗမာပြည်ပျက်မယ့် နေ့ ဆီ တရွေ့ ရွေ့။
အုပ်စုဖွဲ့ကိုက်ဖြတ် မှုတွေ
နိုဝင်ဘာ ခုနှစ်ရက် နေ့ နဲ့ အတူ
ပျောက်ကွယ် ပျက်သုဉ်း လူဖြစ်ရှုံးစေရမယ်
ပြည်သူ့ ရဲ့ဒဏ် အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန်ခံရတော့မယ် ။
Posted by အာဇာနည် at 5:33 AM0comments
မမှန်တာပြော မဟုတ်တာလုပ်နေကြသည့် အာဂဗမာများ
တမျိုးသားလုံး စိတ်ကောင်းထားကြပါမှ စစ်ကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက်နိုင်မည်။တမျိုးသားလုံး ညီညွတ်ကြပါမှ စစ်ကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက်နိုင်မည်။တမျိုးသားလုံး စည်းကမ်းရှိပါမှ စစ်ကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက်နိုင်မည်။တမျိုးသားလုံး ပညာတတ်ပါမှ စစ်ကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက်နိုင်မည်။
လူတိုင်းသိအထက်ပါသဘောတရားများကို လူတိုင်းသိကြပါသည်။ လောကအလယ်သို့ရောက်စ ကလေး ငယ်များမှအစ သေနယ်သို့ တဖက်နင်းနေကြရပြီဖြစ်သည့်လူကြီးမင်းတို့အဆုံး၊ ဤသဘောတရားကို သိကြပါသည်။ အလွှာပေါင်းစုံ၊ အတန်းစားပေါင်းစုံသည် အထက်ပါ ရိုးရှင်းသည့် သဘောသကန်ကို နားလည်ထားကြပါသည်။ မြန်မာတမျိုးသားလုံး ထိုသဘော တရားကို နားလည်သဘောပေါက်ကြပြီး လက်ခံအသိအမှတ်ပြုကြပါသည်။ အားတက်စရာ၊ အားကိုးစရာ အာဂဗမာများပါတကား။
လူတိုင်းပြောထိုကြောင့် လူတိုင်းထိုသဘောတရားကို ဖော်ထုတ်ကြဘို့ နှိုးဆော်နေကြသည်။ “ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ စိတ်ကောင်းထားကြပါ၊ ညီညွတ်ကြပါ၊ စည်းကမ်းရှိကြပါ၊ ပညာရှာကြပါ၊ ” လမ်းဘေးဈေးသည်၊ ဥဋ္ဌ်ကြားမြက်ပေါက်မှအစ နအဖစစ်အုပ်စု၊ တော်လှန် ရေးသမားအလယ် ဘုရားလူကြီး၊ မဟာသံဃာ့နာယကအဆုံး ရွှေနှုတ်ဖျားတွင် အထက်ပါ ရွှေစကားများကို တွင်တွင်ကြယ်ကြယ် သုံးပြုနေလျှက်ရှိကြသည်။ ဝမ်းမြောက်စရာ၊ နှစ်သက် စရာ အာဂဗမာများပါတကား။
လူတိုင်းကျင့်သို့သော်…ဗမာ့ကလေးငယ်များ ငတက်ပြားကလေးများဖြစ်နေကြပြီး၊ ဗမာ့လူပျိုပေါက်များ ဆေးသမား၊ ဘိန်းသမားဖြစ်နေကြသည်။ သမီးပျိုများ ပြည့်တန်ဆာဖြစ်နေကြရပြီး၊ သားပျိုများ လောင်းကစားဒိုင်ကြီးများ ဖြစ်နေကြသည်။ စီးပွားရေးသမားများ စဉ်းလဲနေကြပြီး၊ နိုင်ငံရေး သမားများ ဖောက်ပြားနေကြသည်။ ဝန်းထမ်းများ လာဒ်ပေးလာဒ်ယူလုပ်နေကြပြီး၊ အစိုးရဆို သူများ ခြစားနေကြသည်။ ဂေါပကများ ခွက်ပုန်းသောက်နေကြပြီး၊ သံဃာတော်များ အဂတိ လိုက် နေကြသည်။ ဝမ်းနည်းစရာ၊ စိတ်ပျက်စရာ အာဂဗမာများပါတကား။
ပြောသလောက်မကျင့်ဗမာတို့သည် စကားကြွယ်သလောက် ပျူပျူငှာငှာ၊ ချိုချိုသာသာ၊ တီတီတာတာ၊ ပလီပလာ အင်မတန်မှပင် ပြောဆိုကြပြီး ကြားရသူတိုင်း ဟဒယရွှင်ပြုံး စိတ်နှလုံးထုံးမွေ့ စရာပင်။ ကမ္ဘာ့အရေး၊ မြန်မာ့အရေး၊ သိပ္ပံအကြောင်း၊ နိဗ္ဗာန်အကြောင်းများကိုလည်း အာဘောင်အာရင်းသန်သန်ဖြင့် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အဏ္ဏဝါလှိုင်းလုံးကြီးသဖွယ် အပင့် အမြှောက်၊ အလျှော့အတင်း၊ အကွေးအကောက်၊ အနိမ့်အမြင့်တို့ဖြင့် အားရိုက်ကြ၊ လေတိုက်ကြသည်မှာလည်း တဝုန်းဝုန်း၊ တရုန်းရုန်း။
တကယ့်ဖြစ်တည်မှုနှင့် အကျင့်ကြံ၊ အပြုအမူများကြတော့ နံ့သာဆီနှင့် အီး၊ ခွေးချီးနှင့် ထောပတ်ကွာသလို မိုးနှင့် မြေတမျှ ကွဲပြားခြားနားနေတော့သည်။ “ငါလုပ်သလို မလုပ်ကြနဲ့ ငါပြောသလိုလုပ်” ဆိုသည့် ဖောက်ပြန်သည့် စကားကို အသုံးချနေကြသည်မှာ မဟာ့မဟာ အမှား တခုပင်ဖြစ်လေတော့သည်။ နေ့အခါ အများရှေ့တွင် ဟန်ဆောင်ပြီး “အမေနဲ့ သား” ယဉ်ကျေးပြပြီး ညအခါ ကွယ်ရာတွင်ကျတော့ “မနှင့် မောင်” ရုတ်ချည်း ပြောင်းလွဲသွား ကြသည်မှာ ထွီဖွယ်စရိုက်၊ အာဂလူမိုက် အကျင့်ကြံများပါတကား။ ပါးစပ်ကဘုရားတပြီး လက်က ကားယားဖြစ်နေသည်နှင့် တူနေတော့သည်။
မနာလို ဝန်တိုမှု၊ အဂလိုက်မှုများ ပြည့်လျှမ်းနေကြပြီး ကျေးဇူးမသိတတ်၊ တာဝန် မယူတတ်၊ အမှားကို ဝန်မခံတတ်သည့် ဉာဉ်ဆိုးများလည်း အပြည့်အဝပင်။ ကြီးပွားမည် မကြံနှင့် ဘဝမေ့တော့သည်၊ ချီးမွမ်းမည်မကြံနှင့် ခြေဖျားထောက်တော့သည်။ မစားရလျှင် သဲနှင့်ပက်ချင်စိတ်၊ မင်းသားမလုပ်ရရင် ပတ်မကြီးထိုးဖောက်ချင်တဲ့စိတ်၊ ကိုယ့်ထက်သာ မနာလိုသည့်စိတ်တို့သည် တမျိုးသားလုံးစိတ်ထဲတွင် ကိန်းဝပ်နေကြသည်။ မတုသင့်သည့် အရာတို့တွင် လျှင်စွာတုပကြီးပြီး တုပကောင်းသည့်အရာများကြတော့ တွန့်ဆုတ်လျှင် ဆားပက်ခံသည့် တီကောင်များပမာ။
ကျင့်သလောက်မပြောဘုရားရဟန္တာ၊ သူတော်ကောင်းများမှာ “ငါရဟန္တာဖြစ်ပြီ၊ ဈန်ပျံကြွနိုင်သည်၊ ငါသာ ပညာတတ်၊ ငါသာ အမြတ်ဆုံး၊ ငါ့အား လာဒ်ပါတ်သကာ တို့ဖြင့် ပူဇော်ကြ၊ ”ဟု လူတကာရှေ့ မော်ကြွားခြင်းမရှိ၊ နောင်ကွယ်တွင်လည်း မော်ကြွားခြင်း မရှိပါ။ ဘုရားရဟန္တာ၊ သူတော် ကောင်းတို့သည် လူသူကင်းဝေး ဆိတ်ငြိမ်သည့် တောအုပ် များတွင် တရားဘာဝနာကို ပွားစည်းလျှက် အေးချမ်းစွာ နေလေ့ရှိပါသည်။ ပညာရှိ သူတော်ကောင်းတို့သည် မိမိနာမည်ကို ဖော်၍ ဝါကြွားခြင်းမရှိဘဲ တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနေ ကြသည်။ ကိုယ်ရည်အမျိုးမျိုးသွေးပြပြီး ကိုယ့်နာမည်ဖော်ကာ ရပ်တကာရွာအနှံ ကြွားဝါကြသူများမှာ မသူတော်များပင်ဖြစ်သည်။ သူတော်ကောင်းများမှာ ကျင့်သလောက် မပြောဘဲ ပညာရှိပီပီ နှုတ်ဆိတ်လျှက်ရှိကာ ပြောသလောက် မကျင့်ဘဲ ရပ်တကာအနှံ့ စပ်ရာစပ်ရာဖြန့်၍ မသူတော်များမှာ အပြစ်များကို တိုးပွားစေကြ၏။
ဝေလာဝေးတိုင်းပြည်၏ အနာဂါတ်ကံကြမ္မာသည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းလာဘို့ဝေးစွ၊ ထိုလူ၊ ထိုစိတ်၊ ထိုအကျင့်၊ ထိုအပြုအမူတို့များနှင့်တော့ အရွယ်လွန်ပြည့်တန်ဆာကဲ့သို့ အောက်ကျ၊ နောက် ကျ မျက်နှာမလှနှင့် ထမင်းမဝ၊ ခါးမလှဘဝသို့ ရောက်ရှိဦးမည်ဖြစ်သည်။ “ပျက်စဉ် ပြင်ခဏ” ဟု ပါးစပ်တဖွဖွ ရွတ်ဆိုနေကြသော်လည်း ထိုအညဉ်ဆိုးများကို မည်သူမှမပြင်ကြ။ ပြင်ရန် မတိုက်တွန်းကြ၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း မပြင်ကြ ထိုသို့မပြင်သမျှကာလပတ်လုံး ချေးအိုး၊ သေးအိုးကဲ့သို့ နံဟောင်ပုပ်သိုး ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်မျိုးနှင့် မျက်နှာငယ်စွာ နေကြရဦးမည် ဖြစ်သည်။
မှန်တာပြောလျှင် ရွာပြင်မရောက်သီလမလုံ အထုံအဖျင်းများ ပေါများလာကြသည်တပြိုင်နက် “မှန်တာပြောလျှင်၊ ရွာပြင်ရောက်/ ဖြောင့်လွန်းသည့်သစ်ပင်၊ တက်ရခက်” ဆိုသည့် စကားပုံမှာ လူတကာ၊ ရပ်တကာ၊ ဈေးတကာတို့တွင် ရေပန်းစားနေတော့သည်။ ထိုစကားပုံသည် မှားယွင်းစွာ ဖောက်ပြန်သူများ၏ လက်သုံးစကား ဂွင်ဆင် ထွင်လုံးများသာဖြစ်သည်။ ဘုရားရဟန္တာ၊ သူတော်ကောင်းတို့သည် အရိုးပင်ကြေကြေ၊ အသက်ပင်သေသေ ကိုယ်ကျင့်သီလအရာ၌ တစွန်းတစမှ ဖောက်ပြန်ကြရိုး ထုံးတမ်းမရှိပါ။ ရေစုန်သို့သာ အသာတကြည်မျှောလိုက်ကြပြီး အကုသိုလ်တရားတို့၌ ပျော်ပါးနေသူတို့သာ အကျိုးအကြောင်းမမြင်နိုင်ကြဘဲ ကတိမတည်၊ သစ္စာမမြဲ အကျင့်သီလ ဖောက်လွဲကြခြင်းဖြစ်သည်။ သတ္တဝါအားလုံးသာ သီလမြဲကာ မှန်အတိုင်း ပြောဆိုကြလျှင် ရွာပြင်လည်းမရောက်၊ လိုလားသလောက် အကျိုးဖြစ်ထွန်း မည်သာဖြစ်သည်။
ကိုယ်တိုင်ကျင့် ကိုယ်တိုင်ကြံမိမိကောင်းချင်လျှင် မိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံရမည်၊ မိမိလူမျိုးကို ကောင်းစေချင်လျှင် မိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံရမည်၊ မိမိတိုင်းပြည်ကောင်းစေချင်လျှင် မိမိတိုင်ကိုယ်ကျင့်ကြံရမည်၊ မိမိနိုင်ငံကောင်းစေချင်လျှင် မိမိကိုယ်တိုင်ပင်ကျင့်ကြံရမည်သာ။ မိမိကိုယ်တိုင်က မကျင့်ကြံ၊ မလိုက်နာဘဲ အများသူငါကို လမ်းပြလို့မရ၊ ညွန်ပြလို့မရ၊ ဆုံးမလို့မရသလို အပြစ်တင်လို့ လည်းမရနိုင်ပါ။ မိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံလိုက်နာပါမှ အများသူငါကို ကိုယ်လိုရာသွပ်သွင်း၍ ကောင်းခြင်းသို့ ရောက်စေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် စကားမများ လေပွားမနေဘဲ မိမိကိုယ်တိုင်ကပင် အများသူငါ စံထားလောက်စရာဖြစ်အောင် တရားလက်ကိုင်၊ သတိခိုင်မြဲ၊ စိတ်ဇွဲမလျှော့ကာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ ကိုယ့်လူမျိုးကို ကောင်းရာသို့ ပို့ဆောင်ကြပါဟု တိုက်တွန်း အပ်ပါသည်။အရှင်ဓမ္မ(ဒေလီ)
Posted by အာဇာနည် at 5:31 AM0comments
ဖိလစ် ပိုင်ဝန်ကြီးနှင့် ဟေလောရီ ကလင်တန် မြန်မာ့အရေးဘာပြောလဲ
ဖိလစ်ပိုင် ၀န်ကြီး မြန်မာ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဘယ်လိုဝေဖန်လဲ ဒီစာကြောင်းနှိပ်ပြီး ဆက်ဖတ်
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:20 AM0comments
နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်လိမ်ပွဲ ပြီးမှ ပြည်တွင်း အင်တာနက် ပြန်ကောင်းဖွယ်ရှိ- ဂီရိ မုန်တိုင်း ဓါတ်ပုံများ အင်တာနက် ဖြတ်တောက်မှုကြောင့်သတင်း သိပ်မရခဲ့ 
ပြည်တွင်း၌ အင်တာနက်လိုင်းများ ပြတ်တောက်မှုကြောင့် ပြည်ပ website အားလုံးကြည့်ရှုမရနိုင်ဘဲ Local Website အချို့ကိုသာကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း၊ ထိုပြင် အင်တာနက်ပြတ်တောက်မှုသည် ရန်ကုန်မြို့၌ အဓိကဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
"အခု ရတနာပုံတယ်လီပို့က အင်တာနက် Service တွေလွှဲယူပြီး ကတည်းက အင်တာနက်ပြဿနာ ပေါ်တော့တာပဲ။ ဒီလိုမကြာခဏ အင်တာနက် Connection တွေချပစ်တာဟာ ဒီမိုကရေစီကိုသွားနေတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ပုံရိပ်နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ပုံရိပ်ကိုထိပါးတယ်ဆိုတာ သတိပြုသင့်တယ်။ ရတနာပုံတယ်လီပို့ဟာ ဒီပြဿနာကိုမဖြေရှင်းဘဲ Monopoly လုပ်တာမျိုး ခွင့်မပြုသင့်ဘူး။ သူနဲ့အပြိုင် Service ပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီ အနည်းဆုံးနှစ်ခုလောက် ခွင့်ပြုသင့်တယ်။ Cyber Attack ဖြစ်လို့ပါလို့ ခဏခဏအကြောင်းပြချက် မပေးပါနဲ့။ IT နားလည်တဲ့ Common Sense အသိဥာဏ်ရှိတဲ့သူတိုင်း သိပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အင်တာနက်ကို Monopoly လုပ်ပြီး Freedom of Press ကိုထိပါးတာဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်ပိုင်ခွင့်ကို ထိပါးရာရောက်ပါတယ်"ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:15 AM0comments
စိုင်းဇွမ်ဆိုင်း Saturday, 30 October 2010 16:31
၂၀၁၀၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့က တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိလာသော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကို ကြိုဆိုနေသည့် တရုတ် သမ္မတ ဟူကျင်းတောင် (ဓာတ်ပုံ - Reuters)
CoI ဖွဲ့စည်းရေးကို အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ ဗြိတိန်၊ နယူးဇီလန်၊ နယ်သာလန်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ စသည့် နိုင်ငံများအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း တဒါဇင်ကျော်က ထောက်ခံကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 2:57 AM0comments
သူရဲကောင်းတို့ ရဲ့ 
တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်ကို တွေ့ ရမယ်။
ကျနော်တို့တိုင်းပြည် တခုထဲသာ
ရှိခဲ့တာ မဟုတ်လား ။
တပ်ဦးရဲ့ ယုံကြည်ချက် သံမဏိဓါးသွား
ခွပ်ဒေါင်းရဲ့ ဟန် ခွပ်ဒေါင်းရဲ့ မာန်
လူထုရဲ့တိုက်ပွဲခေါ်သံနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှသာပ။
နှစ်ဆယ့်နှစ်နှစ် ဆိုတဲ့ ခရီးလမ်းမှာ
ယုံကြည်လျက်ပင် ငါတို့ မြင်သည်
ပြည်ချစ်သားကောင်း သူရဲကောင်းတို့ 
တပ်ဦးရဲ မြင့်မြတ်တဲ့ အလံတော်ကို
(နှစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်ပြည့် တပ်ဦးမွေးနေ့ သို့အလေးပြုလျက်)
၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀
Posted by kyaw kyaw naing at 2:19 AM0comments
“မရွံ့သတ္တိ .. ဇွဲလုံ့လ .. အားစိုက်ညီညာ”
ကျောင်းသားတပ်မတော် ၂၂ နှစ်ပြည့်အမှတ်တရ
ရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကြီးကနေ မွေးဖွားပေါ်ထွက်လာခဲ့ရတဲ့ ၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ( မကဒတ ခေါ် ကျောင်းသား တပ်မတော် ) ABSDF ကတော့ အခက်အခဲ အချိုးအကွေ့များစွာ ၊ တိုက်ပွဲများစွာ ၊ အောင်မြင်မှုများစွာ ၊ ပြဿနာများစွာ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှား ရင်း (ကျော်လွှားနေဆဲ)မှာပဲ ၂၂နှစ်သက်တမ်း ဖြတ်သန်းခဲ့လေပြီ ။ မျက်မှောက်ကမ္ဘာရဲ့ တော်လှန်စစ်လမ်းစဉ်တွေအပေါ်သဘောထား ၊ မဟာမိတ် လက်နက်ကိုင် အင်အားစုတွေရဲ့ အခြေအနေ ၊ စစ် အာဏာရှင်တွေရဲ့အညှိုး တကြီးချေမှုန်းမှု ၊ ဆင်ခြေမျိုးစုံနဲ့ ကျောခိုင်းသွားကြသော ရဲဘော်ဟောင်းများ စတဲ့ အကြောင်းတရားမျိုးစုံကြောင့် (မာနယ်ပလောမကျခင် ဟိုဘက်ကာလ များလောက်) ရန်သူစစ်အာဏာရှင်တွေအပေါ် ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိ ၊ ရဲဘော်များ အားမလိုအားမရ ဖြစ်ရလောက်အောင် တပ်ကိုတိုးချဲ့တည်ဆောက်နိုင်မှု မရှိတော့ပေမဲ့ ရန်သူက အမြဲသတိထား စောင့်ကြည့်နေရ လောက်အောင် အရှိန်အ၀ါရှိဆဲ ၊ ကျောင်းသားတပ်မတော်အဖြစ် တောင့်ခံထားနိုင်ဆဲ ၊ ရန်သူနှင့် မညှိနှိုင်းစတမ်း ၊ လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်အပေါ် ယုံကြည်ချက် ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းဆဲပါပဲ ။
အရာရာစွန့်လွှတ်ခဲ့ကြတယ်၊ မိဘ, ညီအကိုမောင်နှမ , ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ခွဲခွာခဲ့ကြရတယ် ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ အတတ်ပညာ အားလုံးစွန့်လွှတ် ထားရစ်ခဲ့ရတယ်၊ အနေအစား ဆင်းရဲပင်ပန်းမှုမျိုးစုံ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတယ် ၊ ရောဂါမျိုးစုံ ၊ မြွေကင်း သဘာဝဘေးမျိုးစုံ ၊ ရန်သူ့ ကျည်/မိုင်း အသက်အန္တရာယ် မျိုးစုံကြားမှာဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတယ် ၊ တစ်ချို့ တိုက်ပွဲထဲမှာ သူရဲကောင်းပီသစွာကျဆုံးခဲ့ကြတယ် ၊ တစ်ချို့ ရောဂါဘယမျိုးစုံကြောင့် ဖျားနာကျဆုံးခဲ့ရတယ် ၊ တချို့ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတယ် ၊ တချို့ ရန်သူ့နယ်မြေထဲ လျှို့ဝှက်ရေးလုပ်ငန်းတွေဝင်ဆောင်ရွက်ရင်း ရန်သူကဖမ်းမိပြီး နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှု မျိုးစုံခံခဲ့ကြရတယ်၊ ထောင်နှစ်ရှည် ချခံခဲ့ကြရတယ် ၊ ဒီနေ့ ဝေဘန်ပြစ်တင်မှုအမျိုးမျိုးခံနေရတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ရဲဘော်တွေဟာ အဲလိုစွန့်လွှတ်မှု တွေနဲ့ (၂၂နှစ်တာကာလ တစ်လျှောက်လုံး) ဖြတ်သန်း ခဲ့ကြရတာပါ ။
ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့နေထိုင်မှုအမှားဟာ ABSDF တစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့အမှားမဟုတ် ပါဘူး၊၂၂ နှစ်တာ ရုန်းကန်ခဲ့ရမှု အခြေအနေများစွာအရ ထိုးစစ်မဆင်နိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေဟာ အပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့နေဘို့မဟုတ်ပါဘူး ၊ ဖိနှိပ်ခံပြည်သူတရပ်လုံး စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရေး ၊ ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေး ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဆိုတဲ့ ၊ ဦးတည်ချက် လေးရပ်နဲ့ လူထုတိုက်ပွဲနဲ့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ ပေါင်းစည်းရေး ကြိုးပမ်း အားထုတ်ရင်း စစ်အာဏာရှင်စနစ်၊စစ်ဗျူရိုကရေစီယန္တရားကို အဓိကပစ်မှတ်ထား တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ဖြစ် ပြီး ယုံကြည်ချက်အတွက် ဒုက္ခမျိုးစုံ ၊ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုမျိုးစုံ ၊ ဝေဘန်ပြစ်တင်မှုမျိုးစုံကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်း တောတောင်တွေထဲမှာ ရပ်တည် နေထိုင်နေတဲ့ ရဲဘော်တွေ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ သတိထားကြဘို့လိုပါတယ် ။
နိုင်ငံရေးအရပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ စစ်ရေးအရပဲဖြစ်ဖြစ် ရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်ရာမှာ အခြေနေသုံးရပ်ကြုံတွေ့ရပါမယ် ၊ ရန်သူကအသာရပြီးကိုယ့်ဘက် ကနိမ့်ပါးနေတဲ့ (အရှုံး)အခြေအနေ ၊ ရန်သူနဲ့တန်းတူ အနေအထားရှိတဲ့ (သရေ)အခြေအနေ ၊ ကိုယ့်ဘက်ကအသာစီးနဲ့ ရန်သူကိုထိုးစစ် ဆင်နိုင်နေတဲ့(အနိုင်)အခြေအနေ ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ် ၊ ဒီနေ့အခြေအနေက အားလုံးရဲ့ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေက နိုင်ငံရေး အရပဲဖြစ်စေ ၊ စစ်ရေးအရပဲဖြစ်စေ အသာရထားပြီး သူတို့ အာဏာသက်ကိုဆွဲဆန့်မဲ့ ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံကို အသက်သွင်းမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို သူတို့စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်ထားတဲ့ စစ်ယူနီဖေါင်းချွတ်တွေ ၊ ကြံ့ဖွတ်တွေနဲ့ ချည်ပြီးတုပ်ပြီးလုပ်တော့မယ်ဆိုတာ မျက်ဝါးထင်ထင်ပါပဲ ၊ ဒါက ပကတိအခြေနေမှန်ပါ ၊ စစ်အာဏာရှင်တွေက နိုင်ငံတကာကိုလိမ်ချင်သလိုလိမ် ၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကို နည်းမျိုးစုံသုံး နှိပ်ကွတ် ၊ ပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ် အနိုင်ကျင့်ချင်တိုင်း ကျင့်နေနိုင်နေသေးတာ ကျွန်တော်တို့ အင်အားစုအားလုံးက အရှုံးဆိုတဲ့အခြေအနေ မှာရှိနေပြီး သူတို့ကအနိုင်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေလို့ပါ ၊ အဲဒီအခြေအနေရဲ့ဆိုးကျိုးဂယက်ကို ပြည်သူတွေ ၊ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအင် အားစုတွေ ၊ ပြည်ပအတိုက်အခံ အဖွဲ့တွေ ၊ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေနဲ့ထပ်တူ ကျောင်းသားတပ်မတော်လဲ ခံနေရတာပါ ။
ခုလို ရှုံးနိမ့်နေတဲ့အခြေအနေကနေ အနိုင်ဆိုတဲ့ အထက်စီးအခြေအနေကို ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲနိုင်ဘို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ စဉ်းစားတွေး တောတတ်သူတိုင်း သိမှာပါ၊ နိုင်ငံရေးအရလဲ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံလို (အနိုင်ရလုလု) အခြေအနေကိုပြန်ရောက်ဘို့ မဖြစ်နိုင်သေးသလို တန်းတူအခြေအနေဖြစ်တဲ့ စားပွဲဝိုင်း ပေါ်ဆွေးနွေးရေးဆိုတဲ့ အခြေအနေတောင် ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြဆဲသာရှိပြီး မလုပ်နိုင်ကြသေးပါဘူး ၊ စစ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင်အင်အားစု အားလုံးလဲ ဒီလိုပါပဲ၊ ကိုယ့်စခန်းတွေအတိုက်မခံရအောင် ၊ မကျအောင်၊ နယ်မြေဒေသစိုးမိုးထားနိုင်အောင် ဆိုတဲ့ တန်းတူနီးပါးဖြစ်ရေးကိုပဲ မနဲကြိုးစား နေကြရပြီး ၊ အနိုင်ကိုဦးတည်မဲ့ မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေ ၊ စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲထိုးစစ်တွေ မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး ၊ တော်လှန်ရေးသက်ဝါရင့်ပြီး အတွေ့အကြုံရော အင်အားရောအများကြီးရှိတဲ့ အဖွဲ့စည်းကြီးတွေတောင် ဒီကနေ့အခြေအနေကို မလွှဲသာမရှောင်သာ ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတာ ၊ ကျောင်းသားတွေ ဘ၀ကနေမှ လက်နက်ကိုင်ဖြစ်လာကြရတဲ့ ၊ တော်လှန်ရေးခရီးကို ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကနေမှ စဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော် အတွက် ဘယ်လောက် တောင့်ခံရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရလဲ ဆိုတာ စာနာနားလည်စိတ်နဲ့ ခံစားတွေးတောကြည့်ကြပါလေ ။
စစ်အာဏာရှင်တွေက လတ်တလောအသာစီးရရှိထားမှုကိုဆုတ်ကိုင်ပြီး ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု အားလုံးရဲ့ လိုလားချက်ဖြစ်တဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ် အသက်ဝင် ရေး ၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး တို့ကို ပြောင် ပြောင်တင်းတင်းကျောခိုင်းပြီး စစ်အာဏာသက်တမ်းတိုးမဲ့ ၊ ကြံ့ဖွတ် အစိုးရတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းရေးရွေးကောက်ပွဲကို တစ်ဘက်သတ်ကျင်းပ ပေတော့မယ် ၊ အဲဒီနောက် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပုံစံသစ်နဲ့ စစ်ပါလီမန်ကို နိုင်ငံတကာက လက်ခံရပ်တည်နိုင် အောင် လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ ဖိနှိပ်ခံဘ၀ ၊ ဆင်းရဲမွဲတေနေမှုဘ၀တွေက ဆိုးသထက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေနဲ့ ရှိနေတော့မှာ ဖြစ်တယ် ၊ ဒါ့ကြောင့် ကျောင်းသား တပ်မတော်အနေနဲ့ နအဖရဲ့ နိုင့်ထက်စီးနင်း ရွေးကောက်ပွဲကို တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ ဆန့်ကျင်သပိတ်မှောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကို ထောက်ခံသဘောတူကြောင်း ၊ လုံလောက်တဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ဖိအားမရှိပဲ နိုင်ငံရေးနည်း နဲ့စားပွဲဝိုင်းမှာဖြေရှင်း နိုင်ရေးဆိုတာ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်သာမက စစ်အုပ်စုကိုအထိနာ အကြပ်ရိုက်စေမဲ့နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ အရှိန်အဟုန်မြှင့် တိုက်ပွဲဝင်သွားတော့မယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ၊ ဘုံရန်သူကို လက်တွဲတိုက်ရေးအတွက် ယုံကြည် ချက်တူ ဘ၀တူ ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲဝင်မှုများ နှင့် ပူးပေါင်းကာ လူထုတရပ်လုံးနှင့် တသားထဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမဲ့အကြောင်း ၊ လူထု လှုပ်ရှားမှု ၊ နိုင်ငံရေး အန်တုမှု ၊ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲနှင့် သံတမန်ရေးဖိအား ၊ တခုနဲ့တခုပေါင်းစည်း ဟန်ချက်ညီတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရေး ၊ နိုင်ငံရေး တော်လှန်ရေး အင်အားစုအားလုံးက ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားနိုင်ကြပါရန်ပန်ကြားကြောင်း ၊ နအဖစစ်အုပ်စုရဲ့ (၂၆.၁၀.၂၀၁၀)နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်မှုအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ကျောင်းသားတပ်မတော်)၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်နဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော် (မကဒတ) ထူထောင်ခြင်း၂၂နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာ တွေ့ရတာဟာ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ဓါတ် ရှိသူတိုင်းက ထောက် ခံအားပေးကြရမှာပါပဲ ။
ခုချိန်က ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့နေရမဲ့အချိန် ၊ လိုအပ်ချက်တွေ ထောက်ပြဝေဘန်နေရမဲ့အချိန် မဟုတ်ပါဘူး ၊ ကိုယ် လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏကိုယ်ပြောပြီး အတူပူးပေါင်း တိုက်ပွဲဝင်ကြရမဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ် ၊ တော်လှန်ရေးအပေါ်ခံယူချက် ရပ်တည်ချက်မှန်ကန်ရင် ၊ ကျောင်းသား တပ်မတော်အပေါ် စေတနာမှန်ကန်ရင် ကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ပြန်လည်အားဖြည့် ၀ိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးကြဘို့ပဲလိုပါတယ် ။
ကျောင်းသားတပ်မတော်ကတော့ အရာရာစွန့်လွှတ်ပေးဆပ်နေမှာဖြစ်သလို ၊ ဖြစ်သန်းပြီးတဲ့ ၂၂နှစ်လို ယုံကြည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ မရွံ့သတ္တိ ၊ ဇွဲလုံ့လ အားစိုက်ညီညာရပ်တည်နေမှာဖြစ်ပြီး တော်လှန်တဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ခေတ်သမိုင်းရဲ့ လိုအပ်ချက်အဖြစ် ကြံ့ကြံ့ ခံတည်ရှိနေမယ်ဆိုတာ အလေး အနက် ယုံကြည်နေပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် ။
Posted by kyaw kyaw naing at 1:57 AM0comments
Posted by kyaw kyaw naing at 1:42 AM0comments
လက်ညိုးထောင်၍ ခေါင်းညိတ်ပါ ” သရော်စာ”
ကိုအေးဆွေ တစ်ယောက် ရွေးကော်ပွဲ ဆိုသည့် အသံ ကြားကတည်းက ဂနာမငြိမ်တော့လွှတ်တော် အမတ် ဖြစ်ချင်ဇောက အားကြီးနေသည် ။ သတင်းများကို နားစွင့်နေသည် ။ အကြားချင်ဆုံး သတင်း ကြားရပါပြီ သတင်းကောင်း NLD ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င် ။ ထိုအချိန်မှ စ၍ ကိုအေးဆွေ တစ်ယောက် အမတ်ရောဂါ ရနေပြီ ။ သူသာမဟုတ် နိူင်ငံရေး လက်စလက်န နည်နည်း ရှိသူများကလည်း ပါတီတွေ အပြေးအလွှား ထောင်ကြသည် ။ သူသာ မဟုတ် နိူင်ငံကျော် တဲ့လူတွေပင် လွှတ်တော် အမတ်ဖြစ်ချင်ကြသည်ဟု မီဒီယာများကို ဖွင့်ဟ ကြသည် ။ မလုပ်၍ မရ ဒေါ်စု ဦးဆောင်သည့် NLD မပါတုန်း အပီအပြင် ၀င်ကြုံးရမည့် ဟု အားလုံးက အားခဲထားသည့် ပွဲဖြစ်သည် ။ အခြေခံ ဥပဒေ စာအုပ်ကို ယောက်၍ တောင် ပြီးအောင် မဖတ်ဖူး ။ လိုချင်သည့် အချက်အလက်ကို သာ နူတ်တိုက် ကျက်ထားရသည် ။
ဒေါ်စု ဆိုသည့် အမျိုးသမီးကလည်း သူ့အဖလို ဘဲ တော်တော်လေးကို တိုင်းပြည်ကို ချစ်သည် ။ တရားမျှတမှု မရှိ၍ ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င် ။ တုံးလိုက်သည့် အမျိုး ၊ အလိုက်သည့် အမျိုးဟု သူ့စိတ်ထဲက ထင်မိနေသည် ။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လွှတ်တော် အမတ်ဖြစ်ဖို့က အဓိက ဆိုသည့် သူ့ဝါဒအတိုင်း ဟုတ်သည် မဟုတ်သည် အသာထား လူထု ယုံကြည်လာအောင် ကြားဖူးသမျှ အကုန် ဖျန်းဖြီးရသည် ။ လိမ်နိူင်လျှင် သမာဓိ ၊ ညာနိူင်လျှင် ပညာရှိ ဆိုသည့် ခေတ်ကြီးတွင် များများ လိမ်နိူင် ၊ ညာနိူင်မှ လွှတ်တော် အမတ် ဖြစ်ဖို့ လမ်းစရှိသည် ။ လူလိမ်နေအေး စာအုပ်ထဲက လိမ်နည်းများကို လည်း ကျင့်ကြံရသေးသည် ။ ပါတီတံဆိပ် အတွက်လည်း သိပ်ပူစရာ မလို ၊ ရှိပြီးသား တံဆိပ်ကို နည်းနည်းလေး မွမ်းမံ လိုက်လျှင် အလုပ်ဖြစ်သွားမည် ။ဒီလောက် ကောင်းတဲ့ အစိုးရ ရှိအုံးမလား ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် နောက်ကွယ်ကနေ ငွေများ ပံ့ပိုးပေးသေးသည် ။ လူထုကို အသိမပေးပါနှင့် လို့တော် မှာထားသည် ။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စမရှိ ၊ လွှတ်တော် အမတ်ဖြစ်ရေးက အဓိက ။
လွှတ်တော် အမတ် ဖြစ်ရေး အတွက် လူထုကို အသည်းအသန် စည်းရုံးနေပါသည် ။ မသိနားမလည်တဲ့ လူငယ်တွေကို NLD နှင့်ဒေါ်စု မကောင်း ကြောင်း နည်းနည်းချင်းစီ မှိုင်းတိုက် သွင်းထား၍ တော်တော်လေးကို ဟုတ်နေသည် ။ သမိုင်းကြောင်းကို ပြောင်းပြန်လှန်ရလည်း ကိစ္စမရှိ ။ နဂိုက အသိညဏ် မရှိတာကို အချို့က အသိညဏ်ကို သစ္စာဖောက်သည် ဆိုသည့် စကားကို နည်းနည်းတော့ ၇ီချင်သေးသည် ။ သို့သော ရီ၍ မဖြစ် ၊ ဟန် တခွဲသားနှင့် နိူင်ငံရေး စကားတွေ များများ ပြောပေးရသည် ။
တွေ့သမျှ စာအုပ်တွေကို ဖတ်ပြီး ကောင်းတာ မှန်သမျှ အကုန် ကော်ပီ ကူးကာ ကျက်မှတ်ထား၍ ပြောသမျှ စကားလုံးတိုင်းက လည် လူထု ကောင်းစားရေး ဆိုသည့် စကားလုံးကို တွင်တွင် သုံးထား၍ ပြည်သူလူထုက တော်တော်လေးကို အထင်ကြီးနေသည် အချိန်တွင် ရှိသမျှ ပစ္စည်းရောင်းကာ အကုန်ပုန်အော၍ မဲဆွယ်နေရသည် ။
ပြည်သူလူထုကို သူ့ပါတီကိုသာ အမှန်ချစ်ခိုင်းနေရသည် ။ မဲရုံများကိစ္စကို သေချာ မသိ ။ ဒါတွေက ကိစ္စမရှိ ၊ အင်တာနက် ဆိုသည့် အရာကြီးကိုတော့ တော်တော်လေးမုန်းတီးသည် ။ သူတို့ လုပ်သမျှ လိုက်လိုက်ဖော်နေသည် ၊ သမိုင်းစာအုပ် အမှန်များကလည်း ထွက်ထွက်လာသေးသည် ။ ဒီကြားထဲ အချို့လူငယ်လေးတွေက သမိုင်းအမှန်များကို ထထအော် နေကြသေးသည် ။ ဒီကောင်တွေ လုပ်ပုံနဲ့ ဆို အကုန်ခက်ပြီ ။ နံမည် အကြီးဆုံး စာရေးဆရာကို ရှာ ၊ သူ့ကို ငွေပုံပေးပြီး သမိုင်းတွေ ဆက်လက် ပြောင်းပြန် လှန်ခိုင်းရမည် ။ ထိုစာရေး ဆရာ ဆောင်းပါးကို ဖတ်၍ သဘောကျ လွန်းလှသည် ။၊ စာရေးဆရာက လည်း ဆော်ချင်စိတ်တွေ ဘယ်လောက်ပြင်းပြနေသည် မသိ အကုန် သိမ်းကြုံး ရမ်းပြထားသည် ။
သိပ်မကြာ ထိုဆောင်းပါး ကို တုန့်ပြန်သံတွေ ညံလာသည့် အခါ စာရေးဆရာက လည်း ထိုရွေးကောက်ပွဲကို စိတ်မ၀င်စား တော့ပါဟု ထအော်လာ သည့်အတွက် စိတ်တော့ ပျက်မိသေးသည် ။ ရွေးကောက်ပွဲ ကြီး ဖြစ်မြောက်မှ လွှတ်တော် အမတ် ဖြစ်ရမည့် အတွက် ဆန့်ကျင်သူများ ကို တန်ပြန် တိုက်ထုတ်ရန် လူငယ်များကို နေ့စားဖြင့် ဌားရသည် ။ ကိုယ်ဌားထားတဲ့ကောင်တွေ မဆိုးဟု တွက်ဆမိသည့် အချိန်တွင် သူတို့ပြန်မေးသည့် မေးခွန်းများကို ပြန်မဖြေတတ်တော့ စိတ်တော့ပျက်မိသေးသည် ။ လူငယ်တွေ နားမလည်နိူင်သည့် စကားလုံးတွေ လှိုင်လှိုင် သုံးပြီး ဖြေရှင်းလိုက်သည် ။ နောက်ဆုံး ဒေါ်စု နှင့် ခမောက်ကို အားကိုး၍ လူထုကို တပါတ်ရိုက်သင့်သည့် နေရာတွင် ရိုက် ၊ ခြေထိုးသင့်သည့် နေရာတွင် ခြေထိုးနှင့် စခန်းသွားနေရာက ရွေးကောက်ပွဲ ကြီး အထမြောက်ဖို့ က အဓိက သာ ဖြစ်သည် ဟု နှလုံးသွင်းထားသည် ။
တွေ့သမျှ လူတိုင်းကို ကျွန်တော်တို့ကတော့ ပူးသတ်မှာပါ ။ ဒီမိုကရေစီ ရဖို့ နည်းလမ်းကတော့
ဒီတလမ်းထဲ ရှိလို့ ကျွန်တ်ာတို့ ရသလောက်လေး တိုးကြည့်မှာပါ ။ ထိုသို့သော စကားများကြောင့် ကိုအေးဆွေနားကိုလူများ သိပ်မကပ်ရဲ
ကံအားလျော်စွာ ကိုအေးဆွေ တစ်ယောက် လွှတ်တော်ထဲ ကို ရောက်ခဲ့ပါသည် ။ နေရာတော်တော်များများတွင် နေရာယူထားသည်က အရေခွံလည်းထားသည့် ကြံ့ဖွတ်များ နှင့် အစိမ်းရောင် လူသားများသာဖြစ်သည့်အတွက် ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား အဖြစ် သူကိုယ့်သူလည်း တော်တော်လေးကို ဘ၀င်မြင့်ချင်သလို ဖြစ်သွားသည်။
အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပသည့် နေ့တွင် သဘာပတိ အဖြစ် အမိုက်မဲဆုံးနှင့် အယုတ်မာဆုံး လူသားဆုကို ရရှိထားသူက လွှတ်တော်တွင် ပထမဆုံး မိန့်ခွန်းပြောပါ သည် ၊ ဘယ်သူက ဘယ်လို အဆို ကို တင်သွင်းရင် ဘယ်လို တုန့်ပြန်လိုက်မည် ဟု ကိုအေးဆွေ စဉ်းစားနေပါသည် ။ သဘာပတိ၏ မိန့်ခွန်းမှာ မည်သည့် လွှတ်တော် အမတ်မဆို တင်းသွင်းလာသည့် အဆိုမှန်သမျှကို ကျွန်ူပ်က သဘောတူလျှင် လက်ညိုးထောင် ခေါင်းငြိမ့်ရမည် ။
ကန့်ကွက်ကြောင်း အဆို တင်သွင်းလျှင် ဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူမည် ဖြစ်သည် ။ လွှတ်တော် အမတ်တိုင်လက်ညိုးထောင် ခေါင်းငြိမ့်တတ်ရမည် ။ ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ ဆန့်ကျင်လျှင် အခြေခံ ဥပဒေတွင် ပါရှိသည့် အတိုင်း ဥပဒ အသစ်ထုတ်ကာ ကန့်ကွက်ပြောဆိုသူအား လွှတ်တော် အမတ်အဖြစ်မှ အနားပေးမည် ။
ကိုအေးဆွေ တစ်ယောက် လွှတ်တော်မှ အပြန် ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ကြီးကို ၀ယ်ချလာပါသည် ။ အိမ်ရောက်သည်နှင့် တပြိုက်နက်ထဲ လက်ညိုးထောင် ၊ ခေါင်းငြိမ့် လေ့ကျင့်ခန်းကို စတင် လုပ်ဆောင်ပါတော့သည် ။ သို့သော သူ့မျက်နှာ အနေအထားက လက်ညိုးထောင် ခေါင်းငုံ့သည့်အခါ ပုံသိပ်မကျချင် ။ ကိုအေးဆွေ တစ်ယောက် အသည်းအသန် ကြိုးစားကြည့်သည် ၊ မဟုတ်သေး ။ ဘာသူ့ဆီက သင်ရရင် ကောင်းမလည်း စဉ်းစားကြည့်သည် ။ အိမ်တွင် ချစ်စရာ အကောင်းဆုံးမှာ သူ့မြေးလေးသာ ရှိသည် ။ သူ့မြေးလေး ဆီက အမူအရာကို အတုခိုးလျှင် တော်တော်လေး ဟုတ်ကာ လွှတ်တော်ထဲ တွင်
သူ့လက်ညိုးထောင် ခေါင်းငြိမ့်ပုံက ချစ်စရာကောင်းနေမည် ဟု အကြံရသည် ။
ထိုကြောင့် မြေးလေးအား အခန်းထဲ ခေါ်ကာ လက်ညိုးထောင် ခိုင်းလိုက် ၊ မုန့်လေး ပေးလိုက် ခေါင်းငုံ့ခိုင်းလိုက် မုန့်လေး ပေးလိုက်နှင့် သူ့လုပ်ရပ်ကို အတော်လေး သဘောကျနေသည့် အချိန်တွင်သူ့မိန်းမ မှ လွှတ်တော် အကြောင်းကို သိချင်ဇော အားကြီးလျှက် အခန်းထဲကို ဗြုန်းစားကြီး ၀င်ချလာပါသည် ။
မိန်းမ ။ ။ ကိုအေးဆွေ .......ရှင်ဘာလုပ်နေတာလည်း ၊ မကြီးမငယ်နဲ့ ၀တ်စုံအပြည့် ၀တ်ထားပြီး
လက်ညုိးထောင်ခိုင်း လိုက် ခေါင်းငုံ့ခိုင်းလိုက် ကလေးကို မုန့်လေးပေးလိုက် နဲ့ ။
ကိုအေးဆွေ ။ ။ မသိရင် အသာနေစမ်းပါ ။ ဒီနေ့ဘဲ လွှတ်တော်ထဲမှာ အမိန့် ထုတ်ထားတယ် ၊
လွှတ်တော် အမတ်တိုင်း လက်ညိုးထောင် ခေါင်းငြိမ့်တတ်ရမည် တဲ့ မိန်းမရဲ့ ။ သူတို့ ပြောတဲ့အတိုင်း မလုပ်ရင် နောက်နေ့ ရာထူးပြုတ်ဘဲကွ ။ ဒါကြောင့်ငါ လက်ညိုးထောင် ခေါင်းငြိမ့် ကျင့်စဉ်ကို သင်ယူနေတာ
မိန်းမ ။ ။ ဒါဆို ရှင်စည်းရုံးရေး ဆင်းတုန်းက ရွတ်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့အကျိုးပြု စာသားတွေအတွက် ဘယ်လို လုပ်မလဲ ။
ကိုအေးဆွေ ။ ။ ဒီစာသားတွေ က နောက် တခါ မဲဆွယ်ခါနီး ကျရင်တော့ ပြန်သုံးရမှာပေါ့ ။
ပထမ နှစ်ကို လွှတ်တော် ထဲမှာ အခြေကျအောင် ကြိုးစားရမယ် ။
ဒုတိယနှစ်ကို မဲဆွယ်ပွဲမှာ ကုန်ထားတဲ့ ငွေ ရဖို့ အတွက် အတိုးကို အရင်းပါ ရအောင် ဂွင်ဖန်ရမယ် ။
တတိယနှစ်ကတော့ နောက်နှစ် မဲဆွယ်ဖို့ ကြံရဖန်ရမယ် ။
နောက်ဆုံးနှစ်ကြရင် အကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့ စာအုပ်တွေ ဖတ် ၊ အလန်းဆုံးစကားလုံး ကို ပြန်ရှာ ၊ အဲဒီတွေကို
အလွတ်ကျက် ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်လေ မိန်းမရဲ့ ။ ဒါဟာ လွှတ်တော် အမတ်တွေရဲ့ အဓိကလုပ်ဆောင်ရမည့် လေးနှစ်တာ တာဝန် ၀တ္တရားတွေပါဘဲ ။
အေးဆွေပိုင်ပါတယ်ကွ ၊ ပူးသတ်မှာပါ ၊ ရသလောက်လေး ၀င်တိုးကြည့်အုံးမှာပါ ။ ကဲမြေးလေးရေ
လက်ညိုးထောင်ပါ အုံး ၊ ခေါင်းငြိမ့်ပါအုံးကွာ ..................။
ထိုနေ့မှ စ၍ ကိုအေးဆွေ နားကို အိမ်သူအိမ်သားတွေ သိပ်မကပ်ကြတော့ ၊ မုန့်လိုချင်သည့် သူ့မြေးနှင့်သူ လက်ညိုးထောင်လိုက် ခေါင်းညိတ်လိုက် နှင့် အဟုတ်မှတ်ကာ လေးနှစ်တာ လွှတ်တော် အမတ်တို့၏ အဓိက လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များကို သာ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်နေကြလေတော့ သတည်း ...................။
Posted by kyaw kyaw naing at 12:29 AM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှလုံးသား ပုံရိပ်များ အပိုင်း(၅)
ကျနော်တို့နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ သူတွေကတော့ တော်တော်များပါတယ်။ ဒီအထဲက အဓိကကျတဲ့ အကြောင်းအရာများနဲ့ အတွေ့အကြုံများကိုပဲ ဦးစားပေး တင်ပြလိုပါတယ်။
နောက်ထပ်တစ်ခါ ၀ိဓူရ သခင်ချစ်မောင်လို့ လူသိများခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီး တစ်ယောက်နဲ့ ကျနော်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့သခင်ချစ်မောင်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ကို ခွင့်တောင်းတော့ အဆင်ပြေစွာပဲ တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့ ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကို သူ့ပါတီက ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် လူကြီးတချို့နဲ့ပါ တွေ့ဆုံပေးခဲ့တယ်။ သူတို့ဘ၀ သူတို့ အတွေ့အကြုံတွေက ကျနော်တို့အတွက် စိတ်ဝင်စား ဖွယ်ရာတွေ အများကြီးပါခဲ့ပါတယ်။ သူပြောတာတွေထဲမှာ သဘောကျတာလေးက ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ -လူမသိ သေးတဲ့စကားတွေနဲ့ အကြောင်းရာလေးပါ။ (သိပ်တော့ မထူးဆန်းပါဘူး။) ဒါပေမယ့် လေးစားစရာကောင်းပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။
သခင်ချစ်မောင်ဟာ ကျနော်တို့ကိုပြောပြနေစဉ်မှာ အတ်ိတ်ကို ပြန်လွမ်းဆွတ်နေပုံပါ။ ပြီးမှ သူကပဲ ဆက်ပြီး..
“ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဖအေတူသမီးပါ……။ ဖအေ့ခြေရာကို နင်းနိုင်ပါတယ်…။ ဘဘ သူ့ကိုယုံတယ်..။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုတဲ့ အမျိုးသား လိုအပ်ချက်လမ်းစဉ်ကို ဒီကနေ့ အကောင်ထည်ဖော်ပေးနိုင်မှာ.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလွဲလို့ .. ကျန်တဲ့သူတွေအဖို့ သိပ်မလွယ်လှပါဘူး….။ဘဘတို့လည်း ကြိုးစားခဲ့တာပါပဲလေ..။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါဘူး…….။”
နောက် ၃ ရက်လောက်အကြာမှာတော့ အန်တီက ကျနော်တို့ကို သူ့ခြံဝင်းအတွင်းမှာ အခမ်းနားလုပ်ဖို့ ခွင့်ပြူခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ တော်တော်ပျော်သွားကြတယ်---။ အန်တီကကျနော်တို့ကိုကြည့်ပြီး ပြုံးရင်း လှမ်းမေးလိုက်တယ်--။
နောက် တယောက်က မေးခွန်းတခု ထမေးလာပါတယ်---။
“ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်………… ကျန်းမာပါစေ ..”
အရင် ကိုမောင်မောင်ဝမ်းရေးသားခဲ့တဲ့ အပိုင်း(၁)မှ အပိုင်း(၄) အထိ မဖတ်ရသေးလို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အစအဆုံး ပြန်ဖတ်လို့ချင်လို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်ချင်သူတွေအတွက် ဒီနေရာမှာ တစ်စုတစည်းတည်း ဖြစ်အောင်တည်ပြပေးထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာကို ကလစ်သာနှိပ်လိုက်ပါ။
Posted by kyaw kyaw naing at 7:46 PM0comments
အောင်သိန်းလင်းအတွက် ပြည်သူ့ မေတ္တာ
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 2:13 PM0comments
ဗုံးဖေါက်ခွဲမှု၌ တပ်မတော်သားများကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဟု ABSDF တုန့်ပြန်
Friday, 29 October 2010 10:31 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
ပဲခူးမြို့ ဥသာမြို့သစ် အမှတ် ၈ ရပ်ကွက် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီရုံး စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက် ဗုံးဖေါက် ခွဲမှုတွင် တပ်မတော်သားများကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကြောင်း မြန်မာနိူင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး ABSDF က ပြောဆိုလိုက်သည်။
အဆိုပါ ဗုံးဖေါက်ခွဲမှုကို ABSDF မှ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိ ကိုဝေလင်းဇင်နှင့် အဖွဲ့ဝင် ကိုခင်ကျော်တို့က ကြိုးကိုင်စေခိုင်းခဲ့ သည် ဆိုသော ယခုလ ၂၆ ရက်ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ နအဖ၏ စွပ်စွဲချက်ကို ABSDF က တုန့်ပြန် လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်က ထုတ်ပြန်သည့် ABSDF ကြေငြာချက်၌ နအဖ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ပဲခူး ဗုံးဖေါက်ခွဲမှု တွင် အဖမ်းခံခဲ့ရသူ ၄ ဦးအနက် ကိုမင်းမင်းထွန်းမှာ ရန်ကုန်တိုင်း တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် စစ်ဘက်ရေးရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ မှ တပ်ဆွယ်မှူးဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုအောင်မျိုးမင်းသူမှာလည်း ရန်ကုန်တိုင်း အင်းတိုင်ပင်မစစ်လက်နက် ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေး တပ်မှ တပ်ကြပ်ကြီး ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားသည်။
စစ်အုပ်စု ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် တပ်မတော်သားများ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်လာသည့်အချက်ကို စစ်အုပ်စု သတင်းထုတ်ပြန် ချက်က ဖုံးကွယ်ထားကြောင်း ABSDF ဥက္ကဋ္ဌ ရဲဘော်သံခဲက RFA သတင်းဋ္ဌာနနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွင် ပြောကြား ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲဝင်မှုများ၏ အဓိကတာဝန်ရှိသူမှာ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်သည့် စစ်အစိုးရသာ ဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည် အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် နိုင်ငံရေးပြဿနာများ မှန်ကန်စွာမဖြေရှင်းသ၍ တိုက်ပွဲဝင်မှုများ လိုအပ်နေဦးမည် ဟု ကြေငြာ ချက်က ဆိုသည်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်၌ သာမန်ပြည်သူများသာမက တပ်မတော်သားများပါ အဖိနှိပ်ခံရမှုကြောင့် စစ်အာဏာရှင် စနစ် တိုက်ဖျက်ရေးတွင် တပ်မတော်သားများပါဝင်လာခြင်း ဖြစ်ပြီး ABSDF ကကြိုဆိုထောက်ခံကြောင်း ဖေါ်ပြထားသည်။
ပဲခူးမြို့ရှိ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားနေသော လမ်းပြကြယ်အဖွဲ့မှ ရှေ့နေဦးအေးမြင့်ကလည်း ပဲခူးဗုံးဖေါက်ခွဲမှုတွင် ပါဝင်သူမှာ ရန်ကုန်တိုင်း စရဖအဖွဲ့မှ ဖြစ်ကြောင်း ရဲအရာရှိများ၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ ၄င်းဗုံးခွဲမှု ဖြစ်ပွားသည့် နေ့၌ RFA သတင်း ဋ္ဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့သေးသည်။
မြန်မာနိူင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးသည် ၁၉၈၈ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလူထုအုံကြွမှုအပြီး နဝတ စစ် အုပ်စုကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရန် ကျောင်းသားအများစုပါဝင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ယနေ့တိုင် နအဖ စစ်အုပ်စုကို လက်နက်ကိုင်ဆန့်ကျင်နေသော တပ်ဖြစ်သည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 2:03 PM0comments
ရခိုင် အင်တာနက်လိုင်း ဖြတ်တောက် ခံရ
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အသုံးပြုနေသော အင်တာနက်လိုင်းများ ဖြတ်တောက် ခံထားရသဖြင့် ယခုအခါ အင်တာနက်မှ တဆင့် ဆက်သွယ်မူများ ပြတ်တောက်နေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ကျောက်ဖြူက လူငယ် တစ်ဦးက “ ဂီရိ တိုက်ပီး အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ထိ အင်တာနက် လိုင်းတွေ ကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ ၂၅ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းက စပြီး ဘယ်လိုမှ အင်တာနက်က သုံးလို့ မရတော့ပါဘူး” ဟု ပြောသည်။
စစ်တွေတွင်လည်း အင်တာနက် လိုင်းပြတ်တောက်နေသဖြင့် အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက် ဖြစ်နေ ရသည်ဟု စစ်တွေမှ အင်တာနက် ဆိုင် ပိုင်ရှင် တစ်ဦးက ပြောသည်။
“လိုင်းပြတ်နေတာက ရက်အနည်းငယ် ကြာပါပြီ။ ခုဆိုလို့ ရှိရင် ဆိုင်ကို ပိတ်ထားရမဲ့ အခြေအနေ ကိုတောင် ရောက်နေပါပြီ။ ဘယ်နေ့ လာမယ်ဆိုတာတော့ အသေအချာ မသိရသေးဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ ကြောင့် အဆက်အသွယ် ဖြတ်တယ်ဆိုပီး ဒီမှာတော့ ခုလို သတင်းတွေ ထွက်နေပါတယ်။ ခုလို အကြာကြီး ပိတ်ထားရင် ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေ အတွက် တကယ့်ကို နစ်နာရတာ ပေါ့ဗျာ” ဟု ပြောသည်။
ယခင် အင်တာနက် လိုင်းကောင်းစဉ်က စစ်တွေနှင့် ကျောက်ဖြူရှိ အင်တာနက် ဆိုင်များတွင် အစိုးရအမှုထမ်းများ၊ ကျောင်းသူ- ကျောင်းသားများနှင့် ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်ကား ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ အင်တာချက် လုပ်သူများမရှိဘဲ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်နေကြောင်း သူက ပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင် အင်တာနက်လိုင်းများ ဖြတ်တောက်ခံရနိုင်ကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း ယခုကဲ့သို့ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပမှီကပင် ကြိုတင်ပြီး အင်တာနက် လိုင်းများကို စစ်အာဏာပိုင်များက ဖြတ်တောက်ထားသဖြင့် အများက နားမလည်အောင် ဖြစ်နေကြသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကာလ အတွင်း ပြည်ပနှင့် ဆက်သွယ် မည်ကို စိုးရိမ်၍ အင်တာနက်ကို ယခု ကတည်းကပင် ဖြတ်တောက်သကဲ့သို့ ဖုံးလိုင်းများကိုပါ ဆက်လက် ဖြတ်တောက်မည်ကို အများက စိုးရိမ်နေကြောင်း သတင်းများ ရရှိသည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 1:56 PM0comments
မြေပုံမြို့နယ်မှ သေဆုံး ၈၃ ဦး စာရင်း
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေခရိုင်နှင့် ကျောက်ဖြူခရိုင်တွင် ယခုလ ၂၂ရက်နေ့က ဝင်ရောက် တိုက်ခတ် ခဲ့သော ဂီရိ မုန်တိုင်းကြောင့် လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး သောင်းချီသော ပြည်သူများ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်နေကြရသည်။
မြေပုံမြို့နယ်မှာ အဆိုးရွားဆုံး မုန်တိုင်းဒဏ်ကို ခံလိုက်ရသော မြေပုံမြို့နယ် ဖြစ်ပြီး မြို့နယ် တစ်ခုလုံး၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ပျက်စီး သွားခဲ့သည်။
ယခုအချိန်ထိ မြေပုံမြို့နယ်တွင် သေဆုံး အလောင်း ၈၃လောင်းကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိထားပြီး ကျန် ပျောက်ဆုံးနေသည့် အလောင်းများကိုလည်း ရှာဖွေ နေဆဲ ဖြစ်သည်ဟု နိရဉ္စရာမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
နိရဉ္စရာသို့ မြေပုံမြို့နယ် လူမူ ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့မှ ပေးပို့သော လူသေအလောင်းနှင့် ကျေးရွာများ စာရင်းမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည်။
၁။ ငရွှေကျေးရွာ - ၁ယောက်
၂။ အမျက်ထွက်ကျေးရွာ - ၅ယောက်
၃။ မြေပုံ ကမ်းသာချောင်းဝရပ်ကွက် - ၁ယောက်
၄။ သဲချောင်းကျေးရွာ - ၂ယောက်
၅။ မြိုင်သာယာကျေးရွာ - ၆ယောက်
၆။ ပြင်ဝန်း ကျေးရွာ - ၂၇ယောက်
၇။ တောင်ချောင်းကျေးရွာ - ၆ယောက်
၈။ တောင်ဇိုင်ကျေးရွာ - ၃ယောက်
၉။ ကြာအင်းတောင်ကျေးရွာ - ၁ယောက်
၁၀။ ကျီးခေါင်းတောင်ကျေးရွာ - ၁၁ယောက်
၁၁။ ရေရှင်ကျေးရွာ - ၁ယောက်
၁၂။ ဝမ်းခေါက်မော်ကျေးရွာ - ၁ယောက်
၁၃။ မြေပုံ ရွာသစ်တည်ရပ်ကွက် - ၁ယောက်
၁၄။ ကြံ့ဟင်းခင်းကျေးရွာ - ၁ယောက်
၁၅။ မင်းချောင်းကျေးရွာ - ၃ယောက်
၁၆။ ရေနီကြီးကျေးရွာ - ၂ယောက်
၁၇။ အငူကျေးရွာ - ၁ယောက်
၁၈။ ထူးချေကျေးရွာ - ၁ယောက်
၁၉။ ဒိုင်းပုံကျေးရွာ - ၅ယောက်
၂၀။ နပ်လှကျေးရွာ - ၂ယောက်
၂၁။ ကန်းညင်ကြီး ကျေးရွာ - ၁ယောက်
၂၂။ (အမည်မသိရွာ) - ၁ယောက်
မြေပုံမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု ၅၁အုပ်စုရှိပြီး ကျေးရွာပေါင်း ၁၅၀ကျော်ရှိသည်။ နအဖ စစ်အစိုးရမှ ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်ခုလုံးတွင် ၂၇ ဦးသာ သေဆုံးကြောင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ သေဆုံးသူ ၈၃ ဦး စာရင်းရထားသော်လည်း ယခုရရှိထားသည့် စာရင်းထက် ပိုမို များပြားနိုင်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 1:53 PM0comments
ဗမာ့ဂုဏ်ကို အဲ့ ဒီလိုဆောင်တာ ....ပြည်သူ့ ချွေးတွေကို ဒီလို ပြောင်းလဲသောက်သုံးကြတယ်
Liquor seized outside diplomat’s residence
The police found 2,190 bottles of different imported brands packed in 220 cartons.
ISLAMABAD: The city police on Thursday night seized over 2,000 bottles of imported liquor from outside the residence of Ambassador of Myanmar in F-11/4. The consignment was claimed, however, by the Embassy of Syrian Arab Republic inaletter to the authorities concerned. The letter was produced before the police by the Myanmar ambassador.
Police raided the consignment when the liquor was being unloaded from the container and claimed onlyaquarter of the total quantity of liquor in the container could be seized. On counting, the police found 2,190 bottles of different imported brands packed in 220 cartons.
Before opening the consignment on Friday evening, the magistrate of the area concerned and the customs authorities were informed about the seizure. However, only customs officials showed up and ‘disappeared’ after seeing the documents.
Later on Friday, the Embassy of Syria sent documents along withacertificate for diplomatic exemption to the Shalimar area police, claiming that the ‘whole’ consignment belonged to the embassy.
One of the letters, also obtained by The Express Tribune, certified that the carrier bearing registration number TKA-048, was transporting assorted alcoholic beverages and liquors from Karachi to Islamabad and belonged to the Embassy of Syrian Arab Republic’.
In another letter, the Syrian Embassy said that the ‘container of this embassy was being off-loaded at the residence of the ambassador of Myanmar located in F-11/4 due to some unavoidable circumstances’.
Posted by အာဇာနည် at 1:30 PM0comments
ရန်ကုန် ကို ရ-၁၁-၁၀ အပြီးမှာ ကွပ်ကဲဖို့ မျောက်ဝံ အရှိန်ယူနေတာပါ
ဒီလိုလူမျိုးတွေ ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ လက်မခံချင်ပေမယ့်လည်း စိတ်ပျက်စွာ လက်ခံထားရတော့ တိုင်းပြည်လည်း ဘယ်တိုးတက်မလဲနော်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 1:24 PM0comments
၂၀၁၀ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့မှာ စစ်အာဏာရှင်တို့က တဖက်သတ် ရေးဆွဲ အတည်ပြု ပြဌာန်းခဲ့သော စစ်အာဏာရှင် စနစ် ဆွဲဆန့်ရေး အခြေခံဥပဒေကို အသက်သွင်းသည့် ခြေလှမ်း ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကို အဓိကထားတင်ပြထားတဲ့ ဂျာနယ်တစ်စောင် ဖြစ်သည့်အတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။ ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က အပြည့်အစုံသတင်းဖတ်ရန်ကိုသာ ကလစ်နှိပ်လိုက်ကြပါ။Irrawaddy Election Journal
Posted by kyaw kyaw naing at 10:59 AM0comments
အစိမ်းရောင်လူသား " ကျော်သူ "
ကလေးအတွေး ကလေးအသိ ဆော့ကစားချင်တာပဲရှိ။
သားသားတို့က မူလတန်း၊ အလယ်တန်း။ ဟို … အကိုကြီးတွေကတော့ Rasu လို့ခေါ်တဲ့ တက္ကသိုလ်အတန်း။
လူတွေက ရှုတ်ရှုတ် … ကျောင်းသားကြီးတွေက တရုတ်ရုတ် … လူထုကြီးက တအုတ်အုတ် … တရုတ် ကုလားတွေက တဖြုတ်ဖြုတ်။
မျက်စိတစ်မှိတ် လျှပ်တစ်ပြတ်ထဲ ကောင်းကင်ပြာကြီးထဲ ကျီးတွေက ပြိုဆင်း … မီးခိုးမှိုင်းတွေက ဝှေ့ဆဲ။ သစ်ပုတ်ပင်ကြီးကတော့ … ခွပ်ဒေါင်းအလံ လွင့်ဆဲ။
ငြိမ်းချမ်းမှုတဲ့လား … ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်လား … အဘမှိုင်းတဲ့လား … ဦးသန့်တဲ့လား။
လား ပေါင်းများစွာထဲ … နားစည်ထဲမှာ ဝှေ့ဝဲ။
ဘာဆို ဘာမှ မသိခဲ့ … ဘာဘာ ဘာမှ မသိဘူးတဲ့လား။
သားတို့သိတာ … ကလေးဘ၀ထဲ … စစ်တိုက်တမ်းကစားဖို့ဘဲ။
တိုက်မယ် … ခိုက်မယ် … ပစ်မယ် … ခတ်မယ် … ထိုးမယ် … ကြိတ်မယ် … ဆက်သွယ်ရေး စက်နဲ့ စကားပြောမယ် … လက်ပစ်ဗုံးနဲ့ ပစ်မယ့် ကစားပွဲတွေ၊ ကစားနည်းတွေ။
အမည်နာမကား … စစ်တိုက်တမ်းကစားနည်းတဲ့။
မင်းက ဗိုလ်ကြီးဆို … ငါက ဗိုလ်မှူး။
မင်းက ဗိုလ်မှူးဆို … ငါက ဗိုလ်ချုပ်။
ဗိုလ်ချုပ်တို့ရဲ့ ပြည်သူကို ကာကွယ်မှုအကြောင်း။
ဗိုလ်ချုပ်တို့က ပြည်သူကို ချစ်တဲ့အကြောင်း။
အကြောင်း … အကြောင်းပေါင်းစုံကို အဟောင်းက အသစ်ဖြစ်အောင် စစ်ရာဇ၀င် သမိုင်းစစ်ကို အမှန်တကယ်အားကျ၊
နှလုံးသားထဲ ထကြွလာအောင် ပြောပြကြတဲ့ မိဘ၊ ဘိုးဘွားများနှင့် ခင်ပွန်းကြီး ဆယ်ပါး။
စစ်ရာဇ၀င်စစ်စစ် သမိုင်းစစ်စစ်ကို တစ်ဖြစ်ဖြစ်မည်အောင် အားကျလို့မ၀သေး … စစ်တိုက် တမ်းကစားလို့ မပြီးသေး … အဖိုးနဲ့ အဖ အင်းစိန်ဆိုတဲ့ ဘ၀တက္ကသိုလ် နံရံကြားရောက်လို့ သွားသလေး။
မိဘ၊ ဘိုးဘွားတို့ရဲ့ ချွေးနည်းစာစစ်စစ်နဲ့ လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်လွန်စက် … အလုပ်ရှင် အလုပ် သမား တပြေးညီရှိရမယ်လို့၊ အမြတ်ကြီးစား အရင်းရှင်တဲ့ … စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက ညွှန်ကြား၊ ပစ္စည်းကိုသိမ်းသွား … လူကိုလည်း ထိန်းထား။
သြော် . . . ကလေးအတွေးနဲ့တွေးကြည့် … “အစိမ်းရောင် လူသားတွေဆိုတာ ဒါမျိုးကြီးလည်း လုပ်သလား” တဲ့။
ဒီလိုနဲ့ … လွတ်လပ်ရေးရလို့ မ၀သေး၊ မလွတ်လပ်တဲ့ ဘ၀ထဲ မဆလလူသား ဖြစ်လို့လာ။
မလွတ်လပ်တဲ့ ဘ၀ထဲ အထက်တန်းကျောင်းနဲ့ တက္ကသိုလ်တွေမှာ … ဆီဒင်ကားတွေ မျက်စိ ရှုပ်လာ။ အခွင့်ထူးခံ သားသမီးတွေ မျက်စိနောက်လာ။ ကျောင်းစိမ်းစာအုပ်တွေ မဲဖောက် လို့လာ။ ဒါဟာ … တပြေးညီတဲ့လားဗျာ။
အေးဗျာ . . . အေးရာ အေးကြောင်း၊ လူငယ်အတွေး … အဖြေရှာကြည့်။
ဟို လူကြီးနဲ့ဖိုက် … ဟို သူငယ်မနဲ့ဆိုက်။
ဟို ဘဲကြီးနဲ့တိုက် … ဟို မဒီကြီးနဲ့ခိုက်။
မကောင်းတာကို ကောင်းသလားလို့၊ မသင့်တာကို သင့်သလားလို့၊ မှားတာကို မှန်သလားလို့ စမ်းသပ်ချင်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်။
ဘာပါလိမ့်လို့ … နားစွင့်ကျ၊ ထကြည့်ကြ၊ စူးစိုက်ကြ၊ အာရုံစိုက်ကြ။
ဟ! . . . ငါတို့ အရေးဘဲ၊ ပြည်သူ့အရေး၊ ဒို့အရေးဘဲ။
ညီလိုက်တဲ့ပြည်သူ၊ ညီလိုက်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေ၊ ညီလိုက်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ။
ဟုတ်ပြီဟေ့ ဆိုပြီး … ငါလည်း ညီအောင်လိုက်ညှိ … ဒဂုံ (၁) နဲ့ ဆေးရုံကြီးမှာ အများနည်းတူ ပေါက်ပေါက်လိုက်ဖောက်။
အဲဒီနောက်တော့ … ထောက် (၆) ကိုရောက်။
ဒီအချိန်မှာ ကလေးက နှစ်ယောက်။
လက်တွဲညီသလား မမေးနဲ့ … လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွား၊ အယူအဆတွေကွဲပြား … ကိုယ်က အနုပညာသမား။
သြော် . . . အဲဒီအချိန်မှာ လူလတ်အတွေး တွေးကြည့် “အစိမ်းရောင်ဆိုတာ ဒါမျိုးကြီးလည်း ဖန်တီးသားပဲ” လို့။
ဒီလိုနဲ့ … န၀တခေတ်ထဲ လူဖြစ်လို့လာ။
ငိုလိုက် ရယ်လိုက်နဲ့ ဘ၀ရဲ့သားကောင်များကို ထပ်မံ၍ ငိုခိုင်း ရယ်ခိုင်းတဲ့ ဓါတ်ရှင်သမိုင်း ရာဇ၀င်ထဲ ဝှေ့လို့ဝဲ။
ဓါတ်ရှင်သမားတို့ကတော့ … ပရိသတ်ပြည်သူကို အကုသိုလ်တွေ ဝေမျှဆဲ။
ဒါနဲ့ … အေးရာ အေးကြောင်း၊ ငြိမ်းရာ ငြိမ်းကြောင်း လူလတ်အတွေးနဲ့ အဖြေရှာကြည့်။
ကောင်းပါလေစွ - ကောင်းလေစွ တွေ့ပါပြီတဲ့ … သုဘရာဇာတဲ့။
သုခ … ကျော်သူ၊ ကျော်သူ … သုခ ကက်ကင်းတဲ့။
ကျေးဇူးရှင် ဘဘဦးသုခရဲ့ စကား … မှန်တာမှ ဒတ်ထိဘဲ။
ကျော်သူ … သချိုင်း၊ သချိုင်း … ကျော်သူ ဒါလည်း ကက်ကင်းဘဲ။
ကက်ကင်းကိုရိုက်၊ ကက်ကင်းကိုဆောင်ကာ … မိဘကို ဒုက္ခပေးခဲ့၊ မိသားစုလေးကို သောကတွေရစေခဲ့၊ ပြည်သူကို အကုသိုလ် ဝေမျှခဲ့တဲ့ ငါ … ၀ဋ်ကြွေးတွေ ကျေ။ ၀ဋ်ကြွေးတွေ ပြေအောင် အနိမ့်ကျဆုံး ကုသိုလ်အလုပ်မျိုးသည် မြင့်မြတ်သော သူတို့သာ လုပ်နိုင်သည်တဲ့ … ။
ဒီမှာတင် … ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုး ပေးဆပ်မှုတွေတိုး၊ ဘာသာတရားကို ရိုကျိုးခဲ့ရ။
ဟ! . . . ဘာတဲ့တုန်း … နားစွင့်စမ်း၊ မော့ကြည့်စမ်း၊ မေးကြည့်စမ်း၊ မျှော်ကြည့်စမ်း၊ လျှောက်ကြည့်စမ်း။
“လုံးစုံများစွာ သတ္တ၀ါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ၊ ဆင်းရဲခပ်သိမ်းငြိမ်းပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းပါစေ” တဲ့ … ဟာ ပြည်သူပြည်သား လူသားအားလုံးကို မေတ္တာပို့တဲ့ အသံတွေပဲ။
မိုးထဲ … လေထဲ … သေနတ်ဆွဲ၍ မဟုတ်။
မိုးထဲ … လေထဲ … ထီးဖိနပ်မဆွဲတဲ့ … သံဃာတော်တွေပဲ။
ဆွမ်းဘယ်လိုများ ဘုန်းပေးကြမလဲလို့ တွေးမိ။
ရိုက်လက်စ ဓါတ်ရှင်ကားတွေ စွန့်ခွာခဲ့ပြီး လှမ်းလိုက်တဲ့ခြေလှမ်း … သံဃာတော်တို့ နားနေရာ ကြေးသွန်းဘုရားကြီးဆီသို့။
ဒီမှာတင် … လက်သီးလက်မောင်း မတန်း … မကြွေးကြော်ခဲ့ဘဲနဲ့ သူ့အလိုလို Auto လင်မယား နှစ်ယောက် ပြည်ထဲရေးရောက်။
ဒါတင်မကသေး … အောင်သပြေထဲလည်း အမြည်းအဖြစ် ခေတ္တခဏရောက်။
သားနဲ့သမီးလည်း … အဝေးကိုရောက်။
သြော် . . . လူကြီးအတွေး … “အစိမ်းရောင်ဆိုတာ ဒါမျိုးကြီးလဲ စွမ်းဆောင်ပေးသားပဲ” လို့။
ဒီလိုနဲ့ … နအဖ လက်ထဲမှာ အလုပ်လက်မဲ့ (၁၀၉ ~ ၁၁၀) ဘ၀။ ယခုအချိန်ထိ သုံးနှစ်တိတိ စွန်းခဲ့ပြီပေါ့။
ခေတ်သုံးခေတ်ရဲ့ နှစ်သုံးနှစ်မှာ အနုပညာသမားဘ၀ကနေ အရှင်လတ်လတ် သုဘရာဇာ ဘ၀ကို လုံးလုံးရောက်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့ … အစိမ်းရောင်လူသား။
ပြည်သူတွေကို အချိန်ပြည့် ပေးဆပ်ခွင့်ရအောင် စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့ … အစိမ်းရောင်လူသား။
အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ တရားတွေကို အချိန်တိုတိုနဲ့ မြင်တွေ့ခွင့်ရအောင် စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့ … အစိမ်းရောင်လူသား။
သံဝေဂတရားတွေ သိမြင်၊ ကျင့်ကြံ အားထုတ်ခွင့်ရအောင် စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့ … အစိမ်းရောင် လူသား။
ငြိမ်းချမ်းမှု အဖြူထည်လူသားဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ … အစိမ်းရောင်လူသား။
သာဓု . . . သာဓု . . . သာဓုပါ … အစိမ်းရောင်လူသား။
အသင်တို့သည်လည်း ကျွန်ုပ်သိသလို … သိကြပါစေ။
ကျွန်ုပ်ရသလို … ရကြပါစေ။
ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့သလို … မြင်တွေ့ကြပါစေ။
ကျွန်ုပ်ပေးဆပ်သလို … ပေးဆပ်နိုင်ကြပါစေ လို့သာ ကျွန်ုပ်ရဲ့ မွေးနေ့ (၅၁) နှစ်ပြည့်မှစ၍ ရန်သူမျိုးငါးပါးမှ ကင်းဝေးကြပြီး၊ လူအချင်းချင်း နှိပ်စက်ခြင်း … ကင်းရှင်း ကြပါစေ။ ဒို့မေတ္တာစွမ်း ကမ္ဘာလွှမ်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ ဟု မေတ္တာပို့သ သစ္စာဆို ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ရယုံမှတစ်ပါး အခြားမရှိတော့ချေ။
မေတ္တာ ကရုဏာ မုဒိတာ ဥပေက္ခာဖြင့်
Posted by kyaw kyaw naing at 10:52 AM0comments
ပြင်ဝန်းချောင်းတွင် မျောနေသော အလောင်များ မြုပ်နှံမည့်သူ မရှိ ဖြစ်နေ
မြေပုံမြို့နယ် ကျွန်းသာယာရှိ ပြင်ဝန်းရွာရှေ့တွင် အလောင်း ၄၀ ခန့်မျောနေပြီး ဆယ်ယူ သဂြိုင်္လ်မည့်သူ မရှိ ဖြစ်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယနေ့လက်ရှိ နောက်ဆုံး ရရှိသော သတင်းအရ သေဆုံးသူ ၉၃ ဦးအထိ မြင့်တက် သွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုအခါ ၀မ်းရောဂါလည်း ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေပြီး သေဆုံးမူများလည်း ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပေးပို့သော သတင်းတွင် ဖေါ်ပြသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:59 AM0comments
ယခု လာမည့် အာဆီယံ ဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်ပြည်အကြောင်း ဆွေးနွေးတော့မည် မဟုတ်ဟု
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:35 AM0comments
နွားသီချင်း အဆိုသင်ပေးရင်တောင် တတ်ဦးမယ်
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ခြေလှမ်းစဖို့ အာဆီယံနဲ့ကုလ တိုက်တွန်းBy ကိုသားညွှန့်ဦး သောကြာ, 29 အောက်တိုဘာ 2010
မနေ့ကတော့ အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်မလွှတ်ကိစ္စနဲ့ လေ့လာသူတွေ စေလွှတ်ခွင့်ရမရ ကိစ္စကို ထပ်ပြီး တီးခေါက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ နိုင်ငံတွင်းရှိနေပြီးသား သံတမန်တွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ရွေးကောက်ပွဲကို လေ့လာနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ တုံ့ပြန်ချက်မျိုးပဲ ရခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 10:38 PM0comments
By ဦးအောင်လွင်ဦး ကြာသပတေး, 28 အောက်တိုဘာ 2010
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 10:34 PM0comments
၁ သောင်းပြန်အမ်းပြီးတွင်းထဲ ခုံချတာ ကောင်းဦးမယ်
မဲတစ်ပြား ငွေ ၁ သောင်းပေးမည်ဟု ကြံ့ဖွံ့ပါတီ စည်းရုံး Friday, 29 October 2010 17:46 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး (ကြံ့ဖွံ့) ပါတီအား မဲထည့်ပါက ငွေကျပ်တစ်သောင်း ပေးမည်ဆို ကာ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၌ ကြံ့ဖွံ့ပါတီက ပြောဆိုစည်းရုံးနေကြောင်း ဒေသခံများ အဆိုအရ သိရသည်။
ယခုလ ၂၅ ရက်နေ့က ကြံ့ဖွံ့ပါတီ၏ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် မန့်မြန်၊ ဟန်ကမ်း၊ ဟင်လုံကျေးရွာအုပ်စု မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး ခရီးတွင် ထိုသို့ ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“အရင်အမျိုးသားညီလာခံတက်ခဲ့တဲ့ ဦးစိုင်းရီမွန်ဆိုတာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကနေပြီး ဒီလ ၂၅ ရက်နေ့က စည်းရုံးရေးလာလုပ် တယ် စည်းရုံးရေးမှူးပေါ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို မဲပေးရင် တစ်ယောက် ငွေတစ်သောင်းစီပေးမယ် ဆိုပြီးစည်းရုံးတယ်” ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
ဟင်လုံအုပ်စုအတွင်းရှိ တောင်ပေါ်ရွာများဖြစ်သော မော့တောင်းနှင့် ပန်ကူရွာများတွင် ဦးစိုင်းရီမွန်က မဲတစ်ပြား ကျပ် ၃၀၀၀ ပေးမည် ဟု ပြောဆို စည်းရုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နမ့်ခမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေတွင် ၀င်ပြိုင်မည့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်း ပန်းဆေးကျော်မြင့်က ကွန်ဟိုင်းရွာ၌ ယမန်နေ့က စည်းရုံးဆင်းရာ တက်ရောက်သူများအား ကျပ်ငွေ ၂၀၀၀ စီပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“မနေ့က ပန်ဆေးပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် ကျော်မြင့် ကွန်ဟိုင်းရွာမှာ စည်းရုံးရေးဆင်းတာ လူအယောက် ၇၀ လောက်တက် တယ် တစ်ယောက်ကို ၂၀၀၀ စီပေးတယ် ရွာကိုကျတော့ ငွေ ၂ သိန်းလှူသွားတယ်” ဟု နောက်ထပ်ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြော သည်။
ရွေးကောက်ပွဲတွင် နမ့်ခမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေတွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ အပါအ၀င် သျှမ်းကျားဖြူပါတီ၊ ပလောင်ပါတီ၊ တစညပါတီ စသည့် ၄ ခု ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 10:32 PM0comments
By ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) ကြာသပတေး, 28 အောက်တိုဘာ 2010
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 10:30 PM0comments
မဲ ကလွဲရင် ဘယ်သူ့ မှ ဂရုမစိုက်
မြေပုံမြို့နယ်တွင် မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်များအား ကိုယ်တိုင် သွားရောက် ကူညီပေးနေသူ တဦးနှင့် ယနေ့ နံနက်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက်
မေး။ ။ မုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ မြေပုံမြို့နယ်က အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိပါလဲ
ဖြေ။ ၊ မုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေက ကျွန်တော်တို့ စုံစမ်းသလောက်က ကျေးရွာ ၅၀ မှာ အိမ်ခြေ ၆၀၀၀ ကျော်ပျက်တယ်။ အိမ်ခြေ ၆၀၀ ကျော်လောက်ဘဲ ကျန်ပါတယ်။ သေတဲ့လူစာရင်းက ရွာ ၅၀ကျော်က စာရင်းကို ကောက်ယူလိုက်တဲ့ အခါ သေဆုံးသူ ၁၀၀ ကျော်စာရင်းရပြီးပြီ။
မေး။ ။ အခုလက်ရှိ ကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေက ဘယ်လိုရှိပါလဲ။
ဖြေ။ ။ ကူညီရေး အခြေအနေကတော့ တောရွာတွေမှာရှိတဲ့ အမိုးအကာ ပျက်နေတဲ့ အိမ်တွေကို ဘယ်သူကမှ အခုအချိန်ထိ လုပ်မပေးနိုင်သေးဘူး။ အန်ဂျီအိုတွေကလည်း လုပ်မပေးနိုင်သေးဘူး။ အစိုးရဌာနကလည်း လုပ်မပေးသေးဘူး။ မြို့ပေါ်မှာတောင်မှ ပျက်စီးသွားတဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဘဲ လုပ်ပေးနိုင်သေးတယ်။ အမိုးအကာ မရှိတဲ့အောက်မှာ နေရသူတွေ အများကြီးရှိနေသေးတယ်။
မေး။ ။ လူတွေ ၀မ်းရောဂါ ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်။ အဲဒီရောဂါ အခြေအနေက ဘယ်လိုရှိလဲ။
ဖြေ။ ။ ၀မ်းရောဂါ အခြေအနေက ကျီးခေါင်းပြင် ကျေးရွာဘက်မှာ နည်းနည်း စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြအနေရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ဘက်က အနေထားတွေကိုတော့ သိပ်ပြီး သတင်းမရသေးဘူး။
မေး။ ။ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေဘက်က ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သတ်လို့ ဘယ်လိုကူညီတာတွေ ရှိလဲ။
ဖြေ။ ။ မြို့ပေါ်မှာတော့ ပြည်နယ် ဆရာဝန် ခေါင်းဆောင်တဲ့ အဖွဲ့နဲ့ ဆေးတပ်က ဆရာဝန်တွေ ခေါင်း ဆောင်တဲ့ အဖွဲ့တွေကတော့ သူတို့လည်း မီနိုင်သလောက် လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ အနေထားတွေ ရှိပါတယ်။ နယ်တွေကိုတော့ ဘယ်ဆရာဝန်မှ မရောက်ရှိနိုင်သေးပါဘူး။
မေး။ ။ အခုလက်ရှိ မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်တွေ စားဝတ်နေရေး အခြေအနေက ဘယ်လိုရှိပါလဲ။
ဖြေ။ ။ စားဝတ်နေရေးအခြေအနေက အာဏာပိုင်တွေလည်း ရွာတိုင်အရောက် လိုက်လို့မပေးနိုင်ဘူး။ ကျေးရွာလူကြီးတွေက သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေဆီက စာရင်းတင်ပြီး လာထုတ်လို့ မိသားစု လူဦးရေအရ တနပ်စာလောက်ဘဲ ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ နောက်ပြိး အန်ဂျီအိုတွေနဲ့ စေတနာရှင်တွေက လာရောက်လှူဒါန်းတဲ့ ဆန်နဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကို လက်ခံပြီး ဖြန့်ဖြူး ပေးနေတာလည်း ရှိတယ်။
မေး။ ။ မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေ အရင် နဂိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့ အခြေအနေ ဘယ်လောက်လို အပ်မယ်လို့ ထင်လဲ။
ဖြေ။ ။ နဂိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့ အချိန်က အနည်းဆုံးနှစ်နဲ့ချီပြီး ကြာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တချို့ နေရာတွေမှာပေါ့။ တချို့ရွာတွေမှာဆို ဘယ်လိုဖြေမလဲ တအိမ်ဘဲကျန်တယ်။ နှစ်အိမ်ဘဲကျန် တယ်။ တချို့နေရာတွေမှာဆို လုံးဝမကျန်ဘူး။ အိမ်ခြေ ၅၀၀ လောက်ရှိတဲ့ ရွာတွေတောင်မှ အိမ်ခြေ ၂၅ ဆောင် ၅၀ လောက်ဘဲကျန်တဲ့ သဘောရှိတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 10:26 PM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု ဖွတ်များ အောင်းရာ သေပြည်တော်တွင် ကြားနာ
မင်းနိုင်သူ Friday, 29 October 2010 18:06
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် အယူခံအမှုကို နေပြည်တော်ရှိ တရားရုံးချုပ်က ယနေ့ လက်ခံကြားနာ စစ်ဆေး ခဲ့သည်။
၂၀၀၇ ခု အောက်တိုဘာ ၆ ရက်က အမေရိကန် နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်မြို့ရှိ မြန်မာ သံရုံးအပြင်ဘက်တွင် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓာတ်ပုံကို သံတိုင်အနောက်တွင် ထားပြီး သရုပ်ဖော် ဆန္ဒပြနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Getty Images)
ယနေ့ တရားရုံးချုပ် ကြားနာမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ NLD ဒုဥက္ကဌ ဦးတင်ဦးက “ဒီနေ့ မနက် ၁၀ နာရီတိတိမှာပဲ တရားသူကြီးချုပ် ဦးအောင်တိုး အပါအ၀င် တရားသူကြီး ၃ ဦးပါ အဖွဲ့က အမှုကို စတင် ကြားနာပါတယ်။ ဒီဘက်က ဦးကြည်ဝင်း၊ ဦးဥာဏ်ဝင်းနဲ့ ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ်တို့က အယူခံလျှောက်လဲချက်ပေးပြီး တဘက်ရှေ့နေကလည်း လျှောက်လဲချက်ပေးပါတယ်။ လိုက်ပါသွားကြတဲ့ ပါတီဝင်တွေကိုလည်း တရားရုံးချုပ်က ၀င်ရောက် နားထောင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ နေ့လည် ၁ နာရီလောက်မှာ သူတို့ နှစ်ဘက် လျှောက်လဲချက် ပေးပြီးပြီလို့ သိရပါတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယနေ့ ကြားနာမှုသည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် အယူခံအတွက် နောက်ဆုံးတရားခွင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး မည်ကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်သည်ကိုမူ တရားရုံးချုပ်က ချက်ခြင်းမထုတ်ပြန်သေးပေ။
“ဒီလိုကိစ္စမျိုးက ချက်ခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချလေ့မရှိပါဘူး။ သူတို့ နှစ်ဘက် လျှောက်လဲချက်တွေအပေါ် စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ တရားရုံးချုပ်တွေမှာ ထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို ကျနော်တို့က စောင့်ကြည့်ကြရမှာပါ။ ဒီတပတ် သောကြာနေ့မှာ ကြားနာတဲ့ အမှုကို နောက်တပတ် သောကြာမတိုင်မီမှာ ထုတ်ပြန်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါက ကျနော့်ထင်မြင်ချက်ပါ” ဟု ဦးတင်ဦးက ဆိုသည်။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်လျှောက်လဲချက် ပေးခဲ့ကြသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေများသည် ယနေ့ ရန်ကုန်သို့ ပြန်လာနေကြဆဲ ဖြစ်သဖြင့် မည်ကဲ့သို့ လျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ကြသည်ကိုမူ မသိရသေးပေ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂၀၀၂ ခုနှစ် မေလက နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာစဉ် နိုင်ငံအနှံ့ ခရီးထွက်ပြီး လူထု တရားပွဲများကို ကျင်းပခဲ့ရာ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလ၌ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒီပဲယင်းဒေသတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ယာဉ်တန်းကို စစ်အစိုးရ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထား သူများက တားဆီး ရိုက်နှက်ပြီးနောက်ပိုင်း နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် နေရစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်အတွင်း အမေရိကန် နိုင်ငံသား ဂျွန် ဝီလျံ ယက်ထောက ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့သောကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်သည်ဟု ဆိုကာ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ထပ်မံ ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် စစ်အစိုးရ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ အမိန့်ဖြင့် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ၁၈ လ သို့ လျှော့ချခဲ့သည်။
အဆိုပါ စီရင်ချက်အတွက် အယူခံလွှာကို ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စက်တင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးသို့ တင်သွင်းရာ လက်ခံခဲ့သော်လည်း အောက်တိုဘာ ၂ ရက် ရုံးချိန်းတွင် ပလပ်ခံခဲ့ရသည်။
ထို့နောက် တရားရုံးချုပ် (ရန်ကုန်) က ယခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင် ပြန်လည် လက်ခံကြားနာခဲ့ပြီး နေပြည်တော် တရားရုံးချုပ်တွင် ဆက်လက်ကြားနာရန် ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်။
နေပြည်တော်တရားရုံးချုပ်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေအမိန့်ဖြင့် ချထားသော နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ၁၈ လ ပြည့်ရန် ၁၅ ရက် အလိုတွင် လက်ခံ ကြားနာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်အစိုးရက ၁၅ နှစ်ကျော်ကြာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 10:23 PM0comments
ပစ်ဖို့ထိုင်ခုံလုဖို့ သာ သိတာ ကယ်ဖို့ က န အ ဖ အလ...
ကျောက်ဖြူခရိုင် ဥက္ကဌကို လေဘေး အမျိုးသမီးတစ်ဦးက မက...
ဖိလစ် ပိုင်ဝန်ကြီးနှင့် ဟေလောရီ ကလင်တန် မြန်မာ့အရေ...
နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်လိမ်ပွဲ ပြီးမှ ပြည်တွင်း အင်တာနက် ပြ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှလုံးသား ပုံရိပ်များ အပိုင်း(...
ဗုံးဖေါက်ခွဲမှု၌ တပ်မတော်သားများကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဟု ...
ရန်ကုန် ကို ရ-၁၁-၁၀ အပြီးမှာ ကွပ်ကဲဖို့ မျောက်ဝံ အ...
ပြင်ဝန်းချောင်းတွင် မျောနေသော အလောင်များ မြုပ်နှံမ...
ယခု လာမည့် အာဆီယံ ဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်ပြည်အကြောင်း ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု ဖွတ်များ အောင်းရာ သေပြည်တော်...
ဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက် ဖွတ် ပါတီပိုင် ကုမ္ပဏီက လယ်မြေသ...
မဲပုံးသယ်လာသည့် နအဖ စစ်တပ် အပစ်ခံရ၍ ၂ဦးသေ ၃ဦး ဒဏ...
ကျောက်ဖြူမှာ လျှပ်စစ်နှင့် ဖုန်းလိုင်းများ ပြတ်တော...
ဒုတိယဗျ ဒုတိယ အောက်ကနေ ရေတွက်ရင်
ပုဆိုးခြုံထဲက လက်သီးကို ပုဆိုးလှန်ပြသော မြို့ တော်...
၀န်ခံတယ်..မီးရှို့ တာ...ကျုပ်တို့့မြို့ တော်ဝန်ကြ...
အန်ဒီအက်ဖ်၏ ဝါဒဖြန့်မှု အန်အယ်လ်ဒီ ရှင်းချက်ထုတ်
ပြည်တွင်းမှာ သတင်းမှတ်တမ်းရယူ လက်စွမ်းပြကြမယ့် cit...
စစ်အာဏာရှင်တို့ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ဂျပန်ရောက်...
စအိုပေါက်မပါတဲ့ ကလေးငယ်လေး အတွက် အကူညီလို(SOS)
ဘယ်တုန်းက အမှန်ပြောဖူးလို့ လဲ
ဘင်ကီမွန်း လည်း ကိုယ်ဘာပြောနေမှန်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်...
Myanmar TV airs cyclone footage
Nuke plan may speed up if...
မြန်မာ့ ပြည်ပပို့ ကုန်..သတို့ သမီးရောင်းဝယ်ရေး
UN: 70,000 people in Myanmar are homeless in wake ...
တိုးတက်နေသော..မြန်မာပြည်ကြီး။ ( Before and After)
ဂီရိဒုက္ခသည်များ ထပ်မံတိုးပွါး၊ အကူအညီများ အကြီးအကျ...
ကြံ့/ဖွံ့ပါတီ နှင့် တစညပါတီ တို့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ...
14 killed in oil well blaze
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဒေသအသီးသီးသို့ လေကြောင်းခရ...
ရခိုင်လေဘေးကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ကြီးမား(VOA)
မြေပုံမြို့နယ်တွင် သေဆုံးသူ အလောင်း ၅၀ ခန့် တွေ့ရိ...
မလေးသွားမယ့် သူတွေ သတိထား
မဲရဖို့ ကလွဲရင် ဘာမှစိတ်မ၀င်းစားတဲ့အာဏာရှင်နဲ့...
မန္တလေးတိုင်းအတွင်း မုန်တိုင်း မိုးသည်းထန်
ဂီရိ မုန်တိုင်း လူ ၅ဦးသေဆုံး
အာဏာရှင် တွေ လက်ကိုင်တုတ်တွေတင်လိုက်တဲ့အလံ အတွက်...
သဘာဝဘေးတွေ့ လို့ ကတော့ အာဏာပိုင်တွေ မျှော်ဖို့စိ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏နှလုံးသားပုံရိပ်များ အပိုင်း ၁ ...
မွဲတာ ခြင်းလည်း တူ ပါ့
ရွေးကောက်ပွဲအပြီး တိုင်းပြည် အခြေအနေ ကောင်းလာဖွယ်မ...
ဂီရိဆိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းကြီး သည် တစ်နာရီလျင် ပြင်း...
ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကို အားအလွန်ပြင်း မုန်တိုင်းဝင်ေ...
နအဖ စစ်တပ်တိုက်ပွဲအတုလုပ်ပြီး ကျေးလက်လူထုအားနှိပ်က...
စစ်တွေမှ ၀န်ထမ်းများ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို မဲထည့်ရန် နည်...
ရခိုင်ပြည်သို့ မုန်တိုင်းဝင်၊ နေ့ခင်းဘက်တွင် ပိုပြ...
ပြည်သူအများ ဘာမှ မသိဘဲ မဲပေးကြရမည်
ယတ်တော မွှေတဲ့မီးကြောင့် ဒေါ်စုတရားရုံးတက်နေရဆဲ
ဒေါင်းအလံ လွှင့်မည့် နေ့တနေ့ တော့ရောက်လာမှာပါ
အမြဲတမ်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေတဲ့မြန်မာပြည်
နိုင်ငံတော်အလံသစ်တင်ပြီး အလံဟောင်းကို မီးရှို့ဖျက်ဆ...
ကင်တားနား တောင် သိသေးတယ်
အလံဟောင်းတောင်မလေးစားခဲ့တာ ဒံပေါက်ရောင် အလံသစ် လော...
အလံသစ်၊ ယတြာနဲ့ သန်း ၆၀ ကို ကိုယ်စားပြု မပြု